စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများ PoundSlots ကာစီနိုဆိုက် - £ 200 အပ်ငွေအပိုဆု!
အဆိုပါ site ကို ProgressPlay Ltd ("Company") မှလည်ပတ်ပြီးမော်လ်တာစိန့်ဂျူလီယန်၊ Soho ရုံး 3A၊ Edge Water Complex၊ Elia Zammit လမ်း၊ မှတ်ပုံတင်ထားသောလိပ်စာဖြင့်လည်ပတ်သည်။ ကုမ္ပဏီသည်အွန်လိုင်းဂိမ်းများကိုမော်လ်တာဂိမ်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့၊ လိုင်စင်နံပါတ် MGA / B2C / 231/2012 နှင့်အညီလုပ်ကိုင်သည် 16 Aprilပြီ, 2013 ရက်တွင်ထုတ်ပေးခဲ့သည် and is licensed and regulated in Great Britain by the Gambling Commission under account number 39335. Gambling can be addictive. Play responsibly.
ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ("စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ") သည်သင်၏ ("သင်"၊ "သင်၏" သို့မဟုတ် "ကစားသမား") ကိုသင်ကုမ္ပဏီမှသင့်အားပေးသောအွန်လိုင်းနှင့်မိုဘိုင်းဂိမ်းကစားခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုထိန်းချုပ်သည်။ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ၀ န်ဆောင်မှုများအသုံးမပြုမီသင်ကအကုန်လုံးဖတ်ရှုသင့်သည်။ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည်သင်နှင့်ကုမ္ပဏီအကြားတရားဝင်ချုပ်နှောင်ထားသောသဘောတူညီချက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသတိပြုပါ။
ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည်ဤစည်းကမ်းချက်များကိုသဘောတူခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်တည်ရှိမှုပေါ်လစီနှင့်လောင်းကစားခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုထည့်သွင်းထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပေါ်လစီနှင့်လောင်းကစားခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများကိုသင်လက်ခံပြီးသဘောတူကြောင်းအတည်ပြုနိုင်သည်။ ဒီမှာနှိပ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏လောင်းကစားခြင်းဆိုင်ရာစည်းကမ်းများအားပြန်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပါ ဒီမှာနှိပ်ပါ.)
ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်အောက်ပါစကားလုံးများနှင့်စကားစုများသည် (နောက်ခံအခြေအနေမှအပအခြားလိုအပ်သည် မှလွဲ၍) သူတို့အနားတွင်ဖော်ပြထားသောအဓိပ္ပာယ်များရှိရမည် -
£ - သင့်အကောင့်ကိုသင်မှတ်ပုံတင်ထားသောငွေကြေးကိုဆိုလိုသည်။
"အကောင့်" ဆိုသည်မှာလူတစ် ဦး ချင်းဖွင့်လှစ်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်ကိုဆိုလိုသည်၊ ထိုသို့သောသူအားဆိုက်၌ဂိမ်းများကစားနိုင်စေရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။
"ဂိမ်းများ" ဆိုသည်မှာပွဲများအပါအ ၀ င်ဆိုက်တွင်ရရှိနိုင်သောဂိမ်းများကိုဆိုလိုသည်။
သြစတြေးလျ၊ ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ ဘီလီဇ်၊ ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းစု၊ ဘူလ်ဂေးရီးယား၊ ခရိုအေးရှား၊ ဆိုက်ပရပ်စ်၊ ဒိန်းမတ်၊ ပြင်သစ်၊ ဂရိ၊ ဟန်ဂေရီ၊ အစ္စရေး၊ အီတလီ၊ လစ်သူဘာ့ဂ်၊ ပေါ်တူဂီ၊ ရိုမေးနီးယား၊ စပိန်၊ တူရကီနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ကုမ္ပဏီမှ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားသောနောက်ထပ်တရားစီရင်မှုများ။ ဤစာရင်းကိုကုမ္မဏီမှတစ် ဦး တည်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်အခါအားလျော်စွာပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။
အောက်ဖော်ပြပါအခန်းတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း "တိုင်ကြားချက်" ဆိုသည်မှာ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျေနပ်မှုမရှိကြောင်းဖော်ပြခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
"အငြင်းပွားမှု" ဆိုသည်မှာအောက်ဖော်ပြပါအခန်း O တွင်ဖော်ပြထားသည့်ကန ဦး ၈ ပတ်အတွင်းဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းကုမ္ပဏီမှမဖြေရှင်းရသေးသည့်တိုင်ကြားမှုကိုဆိုလိုသည်။
"ဆိုက်" ဆိုသည်မှာမည်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်နှင့် / သို့မဟုတ်မိုဘိုင်း ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်နှင့် / သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီပိုင်၊ လည်ပတ်သို့မဟုတ်အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပသောမိုဘိုင်း application ကိုဆိုလိုသည်။
"ငါတို့"၊ "ကျွန်ုပ်တို့၏" (သို့) "ငါတို့" ဟူသည်ကုမ္ပဏီနှင့် / သို့မဟုတ်လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီများ၊ တွဲဖက်များ၊ ၀ န်ထမ်းများ၊ ဒါရိုက်တာများ၊ အရာရှိများ၊ အေးဂျင့်များ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ အတိုင်ပင်ခံများနှင့်ကန်ထရိုက်တာများကိုဆိုလိုသည်။
ဆိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်း၊ ဆိုက်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုများထဲမှပါဝင်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီလုပ်ဆောင်ရန်သဘောတူသည်၊ သူတို့အားကြိုတင်မှာကြားထားခြင်းမရှိဘဲအခါအားလျော်စွာမွမ်းမံနိုင်သည်။
ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများကိုအချိန်မရွေး၊ အကြွင်းမဲ့သီးသန့်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ဖြင့်ပြင်ဆင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ပြောင်းလဲမှုမစတင်မှီစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်အားအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအာဏာသက်ရောက်ခြင်းမပြုမီပြုလုပ်သောမည်သည့်အလောင်းအစားကိုမဆိုအလောင်းအစားပြုလုပ်သောအခါစည်းကမ်းချက်များနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားဖြင့်ထိန်းချုပ်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤပြင်ဆင်ချက်အားဖြင့်ချည်နှောင်ခြင်းကိုမခံလိုပါကဆိုက်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရပ်တန့်ရမည်။ စည်းကမ်းချက်များနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားပြောင်းလဲမှုတစ်ခုပြုလုပ်ပြီးပါကဆိုက်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရပ်တန့်လိုပါကရရှိနိုင်သည့်ရန်ပုံငွေအားလုံးကိုထုတ်ယူပြီးဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီသင့်အကောင့်ကိုပိတ်နိုင်သည်။
ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည်ပါတီများအကြားကြိုတင်သဘောတူညီချက်များအားလုံးကိုပယ်ဖျက်ပြီးသင်နှင့်ကုမ္ပဏီအကြားသဘောတူညီချက်တစ်ခုလုံးကိုဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားလက်ခံရန်သဘောတူသောအခါသင်သည်ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများတွင်ကုမ္ပဏီမှဖော်ပြသောကိုယ်စားပြုမှု မှလွဲ၍ မည်သည့်ကိုယ်စားပြုမှုကိုမှမှီခိုခြင်းမရှိကြောင်းသင်အတည်ပြုပါသည်။
D. ပါ ၀ င်ခွင့်ရှိသူ
အောက်ဖော်ပြပါအချက်များအားလုံးနှင့်ကိုက်ညီမှသာ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
သင်နေထိုင်သောနိုင်ငံ၏ဥပဒေများအရသတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းအနည်းဆုံးအသက် (၁၈) နှစ် (သို့) အသက်အရွယ်ဖြစ်သည်။ ဤအမှု၌ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အသက်မပြည့်သေးသောလောင်းကစားခြင်းသည်ပြစ်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသင်၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်လိုသည်။
၀ န်ဆောင်မှုများအသုံးပြုခြင်းကြောင့်သင်သည်မည်သည့်ဥပဒေသို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းကိုမဆိုချိုးဖောက်ခြင်းမရှိပါ။ ဤအခြေအနေတွင်၊ သင်နေထိုင်ပါက (သို့မဟုတ်) ကန့်သတ်ထားသည့်နယ်မြေများအပါအ ၀ င်ဆိုက်တွင်ပေးထားသော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုခြင်းအားတားမြစ်သည့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်တွင်ပါ ၀ င်လျှင်သင်သည်တားမြစ်ထားသောလုပ်ဆောင်မှုတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းမရှိကြောင်းသင်သဘောတူသည်။
သင်သည်ကစားသမားမဟုတ်ပါ၊ အခြားမည်သည့်ဆက်သွယ်မှုမှမပါရှိသည့်အပြင်ပွဲတစ်ခုနှင့် / သို့မဟုတ်ကစားပွဲ၏ရလဒ်တစ်ခုအပေါ်တွင်လွှမ်းမိုးမှုရှိနိုင်သည်။
သင်သည်ယခင်ကကုမ္ပဏီ၏ကွန်ယက်၏အခြားအကောင့်တစ်ခုမှကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲမိမိကိုယ်ကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ လောင်းကစားကော်မရှင်၏လိုင်စင်အောက်ရှိဆိုဒ်များကိုကြည့်ပါ ဒီမှာ နှင့်မော်လ်တာဂိမ်းကစားခြင်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့လက်အောက်ရှိဆိုဒ်များစာရင်းအတွက် ဒီမှာ; နှင့်
၀ န်ဆောင်မှုများသည်မည်သည့်သက်ဆိုင်သောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ဥပဒေများမှလောင်းကစားခြင်းကိုအင်တာနက်နှင့် / သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းများမှတားမြစ်ထားသောကစားသမားများအတွက်သာရည်ရွယ်သည်။ သင့်အနေဖြင့်သက်ဆိုင်သည့်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရန်ကုမ္ပဏီအားရည်ရွယ်ထားခြင်းမရှိပါ။ သင်၏ဆိုက်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအားသင်၏အသုံးပြုမှုသည်သက်ဆိုင်သောဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်စည်းမျဉ်းများအားလုံးနှင့်ကိုက်ညီစေရန်သင်ကိုယ်စားပြုသည်၊ ခိုင်လုံသည်။ သဘောတူသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုများ၏ကမ်းလှမ်းမှုသို့မဟုတ်ရရှိနိုင်မှုကိုဤ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ဖိတ်ကြားခြင်းအဖြစ်မှတ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခြင်းများမပြုလုပ်ရပါ။ (အကယ်၍ ကန့်သတ်ထားသည့်နယ်မြေများအပါအ ၀ င်) ဤအသုံးပြုမှုကိုလက်ရှိဥပဒေအရတားမြစ်ထားသည့်နေရာတွင်သင်နေထိုင်ပါကသို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကမ်းလှမ်းရန်မရွေးချယ်ပါ။ သင်၏ဆိုက်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်၏အသုံးပြုမှုသည်တရား ၀ င်မှုရှိ၊ မရှိဆုံးဖြတ်ရန်သင်သာတာဝန်ယူရမည်။ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် / သို့မဟုတ်ဆိုက်၏တရားဝင်မှုနှင့် / သို့မဟုတ်ဤဆိုဒ်မှတစ်ဆင့် ၀ န်ဆောင်မှုများတွင်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှပါဝင်ခြင်း၏တရားဝင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဖော်ပြခြင်းသို့မဟုတ်အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်ခြင်းများကိုဖော်ပြခြင်းသို့မဟုတ်အာမခံခြင်းမရှိပါ။ မင်း ဤဆိုက်မှမည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆိုမှတ်ပုံတင်ခြင်းသို့မဟုတ်မ ၀ င်မှီသင်နှင့်သက်ဆိုင်သောမည်သည့်ဥပဒေများနှင့်မဆိုလိုက်နာရန်သင်သေချာစေရန်မှာသင်၏တာ ၀ န်ဖြစ်သည်။ သင်၏ဆိုက်နှင့် / သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်၏တရားဝင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိဥပဒေရေးရာအကြံပေးများနှင့်တိုင်ပင်သင့်သည်။
ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ထမ်းများ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အရာရှိများ၊ ၄ င်းတို့၏မိသားစု ၀ င်များ၊ တွဲဖက်များသို့မဟုတ်လက်အောက်ခံများနှင့်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသည့်လုံခြုံရေးစနစ်နှင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေဆက်သွယ်ထားသောအခြားပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ပါ ၀ င်ပတ်သက်သူမည်သူမဆို။ ကြော်ငြာခြင်း၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဖြည့်ဆည်းခြင်းအေဂျင်စီများ၊ အာမခံနှင့်ဥပဒေရေးရာအကြံပေးများ၊ ၀ က်ဘ်စီမံကွပ်ကဲသူနှင့်ဝက်ဘ်ပေးသွင်းသူများနှင့် ၄ င်းတို့၏မိသားစု ၀ င်များအပါအ ၀ င်ဤဆိုဒ်၏လည်ပတ်မှုနှင့်၎င်းကိုတည်ထောင်ခြင်းတို့တွင်မည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုမျိုးတွင်မဆိုပါဝင်ခွင့်ရှိသည်။ အထက်ပါဖော်ပြချက်များ၌ပါ ၀ င်ခွင့်မရှိသူမည်သူမဆို - ဤကဲ့သို့သောဖယ်ထုတ်ထားသူကိုအစားထိုးသူအခြားမည်သူမည်သူမဆိုသည်ဆိုက်မှရရှိသော (သို့) ရည်ညွှန်းသည့်မည်သည့်ဆုကိုမဆိုခံစားခွင့်ရှိရန်အတွက်ကောင်းမွန်သောအမိန့်အတွက်ရှင်းလင်းထားပါသည်။ နှင့်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အကောင့်ကိုဆိုင်းငံ့ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ (ငွေသွင်းထားသည့်ငွေအားလုံးကိုအေးခဲစေသည်) နှင့်အကောင့်ရှိအပိုဆုများ၊ အနိုင်ရရှိမှုများနှင့်အပိုဆုကြေးများအားလုံးကိုပယ်ဖျက်နိုင်သည်။
၀ န်ဆောင်မှုတွင်ပါ ၀ င်လိုသူမည်သူမဆိုဆိုက်တွင်အကောင့်တစ်ခုဖွင့ ်၍ စာရင်းသွင်းရန်တာဝန်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်သင်ပေးသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့“ သင်၏ဖောက်သည်သိသူ” လုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ်ပြန်လည်သုံးသပ်ပါမည်။ မသမာမှုများ၊ သံသယဖြစ်ဖွယ်အချက်အလက်များ၊ အပ်ငွေအမြောက်အမြား၊ အကောင့်ကိုအသုံးပြုရန်အသုံးပြုသော IP များ၊ ပုံမှန်မဟုတ်သောဂိမ်းကစားခြင်းလှုပ်ရှားမှုနှင့်သင်၏အထူးအချက်များအပါအ ၀ င်မည်သည့်အထူးအခြေအနေများတွင်မဆိုကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ထပ်မံ“ သင်၏ဖောက်သည်ကိုသိ” လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသယ်ဆောင်သွားမည်။ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်။
သင်သည်သင်၏ Identification အသေးစိတ်ကိုလျှို့ဝှက်ထားရန်နှင့်၎င်းတို့အားအခြားတစ်ခုသို့လွှဲပြောင်းခြင်းမပြုရန်သင်အပြည့်အဝတာဝန်ယူရမည်။ သင်၏မှတ်ပုံတင်အသေးစိတ်ကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအသုံးပြုခြင်းအတွက်တာ ၀ န်အပြည့်ရှိခြင်းသည်သင်နှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ သင်တစ် ဦး တည်းကသင်၏သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအသုံးပြုခြင်းမှရရှိသောတာ ၀ န်အားလုံးကိုခံယူလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကုမ္ပဏီ၏အမှားများ မှလွဲ၍ သင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုနေရာလွဲ။ မေ့ပျောက်လျှင်သို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးလျှင်ကုမ္ပဏီသည်ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ပျက်မှုနှင့်ဆက်နွယ်သောတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တာ ၀ န်မရှိပါ။
ဒီဆိုဒ်တွင်အကောင့်တစ်ခုသာသင့်အားခွင့်ပြုထားသည်။ အကယ်၍ သင်သည်တစ်ခုထက်ပိုသောအကောင့်တစ်ခုကိုဖွင့်ပါကကုမ္ပဏီသည်သင်၏အကောင့်အားလုံးသို့မဟုတ်အားလုံးကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ပိတ်ဆို့နိုင်သည်သို့မဟုတ်ပိတ်နိုင်သည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် Accounts ရှိအပိုဆုများ၊ အနိုင်ရရှိမှုများနှင့်အပိုဆုကြေးများကိုမဆိုပယ်ဖျက်ပြီး Accounts တွင်အပ်နှံထားသည့်ရန်ပုံငွေအားလုံးကိုပြန်ပေးနိုင်သည်။
ကုမ္ပဏီသည်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်၊ အကြောင်းပြချက်ပေးရန်မလိုပဲအကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်သို့မဟုတ်ရှိပြီးသားအကောင့်ကိုပိတ်ရန်ငြင်းဆန်နိုင်သည်။ သို့သျောလညျး, ပြီးသားလုပ်ကန်ထရိုက်တာဝန်ဝတ္တရားလေးစားပါလိမ့်မည်။
သင်၏ ၀ င်ရောက်မှုသည်သင်၏အကောင့်ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်းအားသင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ပြီးမည်သည့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကမှပြုလုပ်သည်မဟုတ်ပါ။
အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ဤဥပဒေအားဖြင့် (က) မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းသင်တင်ပြသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်မှန်ကန်ပြီးမှန်ကန်ကြောင်းနှင့်သင်သည်ပြောင်းလဲမှုကိုချက်ချင်းမွမ်းမံရန်ပြုလုပ်သည်။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသုံးပြုမှုအတွက်သာဖြစ်ပြီးမည်သည့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကမှအသုံးပြုမည်မဟုတ်ပါ။ (ဂ) အကောင့်တွင်သင်ငွေထည့်ထားသည့်မည်သည့်ရန်ပုံငွေကိုမဆိုအားကစားကစားခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက်သင်ကအသုံးပြုလိမ့်မည်။ (() ကုမ္ပဏီသည် ဘဏ္institutionာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့်သင်၏အကောင့်ရှိမည်သည့်ရန်ပုံငွေသည်မတူညီသောချိတ်ဆက်မှုအမျိုးမျိုးနှင့် / သို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွားများမဖြစ်ပေါ်စေရ။ (င) သင်သည်စိတ်ကောင်းသောသူဖြစ်ပြီးသင်၏လုပ်ရပ်အတွက်တာ ၀ န်ယူနိုင်စွမ်းရှိသည်။ (စ) ဖတ်ရှုရန်မှာသင်၏တာဝန်ဖြစ်သည်။ ဂိမ်းကစားခြင်းစည်းမျဉ်းနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုနားလည်ပြီးထိုစည်းမျဉ်းများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုသင်အပြည့်အဝနားလည်သည်။ (ဆ) အားကစားပွဲများတွင်အသုံးပြုခြင်းသည်ရန်ပုံငွေများဆုံးရှုံးခြင်းအန္တရာယ်ရှိနိုင်ကြောင်း၊ (ဆ) သင်ကုမ္ပဏီနှင့်ပူးပေါင်းမည်ဖြစ်သည်ကိုသင်နားလည်သည်။ ထိုသို့မေတ္တာရပ်ခံအားလုံးနှင့်အတူကပေး စာရွက်စာတမ်းများကိုအပြည့်အဝ၊ ပြည့်စုံ။ မှန်ကန်သောပုံစံဖြင့် (၁) သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများအားအသုံးပြုခြင်းသည်သင်နှင့်သက်ဆိုင်သောမည်သည့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ဥပဒေကိုမဆိုချိုးဖောက်ခြင်းမရှိကြောင်းအတည်ပြုပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်၊ (ည) သင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုသင်၏အသုံးပြုမှုကြောင့် (နိုင်သော်လည်းအကန့်အသတ်မရှိ) ကြောင့်ပေးဆောင်နိုင်သောအခွန်သို့မဟုတ်အခြားကောက်ခံသည့်မည်သည့်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရ၊ အခွန်သို့မဟုတ်အခြားအာဏာပိုင်ကိုမဆိုစာရင်းသွင်းခြင်း၊ ()) ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်အသုံးပြုမည်။ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသောကုမ္ပဏီနှင့်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ယုံကြည်မှုရှိပါသလား။ (၁) ဆိုက်တွင်ကစားပွဲများကစားခြင်းနှင့်ကစားခြင်းများကြောင့်လောင်းကြေးများနှင့်လောင်းကစားများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောသင်၏ဆုံးရှုံးမှုအားလုံးအတွက်သင်သာတာဝန်ယူလိမ့်မည်။ (m) ကုမ္ပဏီသည်တစ် ဦး တည်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ဖွင့်ရန်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည် သင်၏အကောင့် (လက်ရှိကန်ထရိုက်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများကိုလေးစားပါက) ကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့် / သို့မဟုတ်ပိတ်ရန် (သင်၏ငွေစာရင်းအားလုံးကိုထည့်သွင်းထားသည့်ငွေပမာဏအပါအ ၀ င်) သင်၏အကောင့်ကိုဆိုင်းငံ့ထားပြီးသင်၏အကောင့်ရှိအပိုဆုများ၊ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများပါပြprovision္ဌာန်းချက်များကိုချိုးဖောက်ခြင်း၊ ()) သင်၏အကောင့် (သင်၏အကောင့်ထဲသို့ ၀ င်ရန်လိုအပ်သောသင်၏အသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်အပါအဝင်) ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်သင့်အနေဖြင့်ဆက်နွယ်မှုရှိသည့်လုပ်ရပ်များနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်များအတွက်သင့်တွင်သာတာဝန်ရှိသည်။ သင်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအသုံးပြုနေစဉ်သင်၏အကောင့်ထဲသို့မည်သူမဆိုသင်၏အကောင့်နှင့်အတူပါ ၀ င်ပြီး၎င်းလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုသင်ကပြုလုပ်သောလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်များအဖြစ်မှတ်ယူလိမ့်မည်။ (ဏ) သင်၏အကောင့်အားခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲသံသယဖြစ်ဖွယ်အသုံးပြုမှုကိုကုမ္ပဏီအားချက်ချင်းအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။ (င) ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ သင်ပြုလုပ်သောငွေပေးချေမှုအားပြန်လည်ပေးဆပ်ခြင်းမပြုရ၊ (သို့) ငြင်းပယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းမပြုရ။ ထိုသို့သောအရေးယူမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောမည်သည့်ဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက်မဆိုကျွန်ုပ်တို့အားကျွန်ုပ်တို့အားပြန်လည်ပေးဆပ်မည်။ သင်သည်သင်၏အကြွေးများအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ထံချက်ချင်းပေးလိမ့်မည်။ (q) ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်လျော်ကြေးပေးခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်တောင်းဆိုမှုများ၊ တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ၊ ဆုံးရှုံးမှုများ၊ သင်အားဖြင့်ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုချိုးဖောက်ခြင်းနှင့်သို့မဟုတ်ဆိုက်အားသင်၏အသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်မည်သည့်တတိယပါတီမှမဆိုခွင့်ပြုချက်မရှိသောအသုံးပြုမှုကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာသောအခြားတာ ၀ န် ၀ တ္တရားများကြောင့်တရားဝင်အခကြေးငွေများကိုရယူခြင်း။
သင်က (က) သင်၏အကောင့်ကိုအသုံးပြုမည်မဟုတ်၊ မည်သည့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆိုတရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုများအတွက်သင့်အကောင့်ကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်း ထပ်မံ၍ ကိုယ်စားပြု၊ သင်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်နှင့်အချက်အလက်အားလုံးကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များထံထုတ်ဖော်ခွင့်နှင့်သင်၏အကောင့်ကို (ဆိုင်းငံ့ထားသည့်ရန်ပုံငွေအားလုံးအေးခဲစေခြင်းအပါအ ၀ င်) ကိုရပ်ဆိုင်းထားသင့်ပြီးသင်၏အကောင့်ရှိအပိုဆုများ၊ အနိုင်ရမှုများနှင့်အပိုဆုကြေးများအားလုံးကိုပယ်ဖျက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သင်သည်သင်၏အကောင့်ထဲသို့ငွေသွင်းခြင်းသည်မည်သည့်တရားမဝင်သောအရာနှင့်မဆိုသက်ဆိုင်သည်၊ အထူးသဖြင့်မည်သည့်တရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်အရင်းအမြစ်မှမဆို၊ ()) သင်နှင့်သင်လုပ်ဆောင်သောတရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဆုံးရှုံးမှု၊ တာ ၀ န်နှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအားလုံးအတွက်သင်တစ် ဦး တည်းသာတာဝန်ယူရမည်။ (င) သင့်တွင်အကောင့်မရှိသေးပါ ကုမ္ပဏီမှရပ်ဆိုင်းလိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်ရပ်ဆိုင်းလိုက်ခြင်း (f) ငွေစာရင်းနည်းလမ်းများ (ဥပမာ - ယူကေတွင်မရရှိနိုင်သည့်ခရက်ဒစ်နှင့်ဒက်ဘစ်ကဒ်၊ အီး - ပိုက်ဆံအိတ်စသည်) သည်သင်၏အကောင့်နှင့်ပတ်သက်သောကုမ္ပဏီအားသင်ပေးအပ်သောအချက်အလက်များဖြစ်သည်။ သင်နှင့်သင်၏နာမ၌သင်ပိုင်ဆိုင်သောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများ (သို့မဟုတ်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းပိုင်ရှင်သည်သင့်အားဆိုက်မှတစ်ဆင့်လောင်းကြေးတင်ခြင်းအတွက်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သောခွင့်ပြုချက်အားလုံးကိုသင့်အားပေးအပ်ထားကြောင်း) နှင့်သင်ကထိုအကန့်အသတ်အတွင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းကိုပြုလုပ်သည်။ (ဆ) သင်အသုံးပြုသည့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းအားပိုင်ရှင်ကသင့်အားပေးအပ်သည့်ခွင့်ပြုချက်ကိုအတည်ပြုရန်မည်သည့်ပုံစံနှင့်ပုံစံဖြင့်မဆိုကျွန်ုပ်တို့၌တာဝန်မရှိပါ။ သင်သည်လောင်းကစားတွင်စွဲစွဲနေကြောင်းကုမ္ပဏီအားသင်အသိမပေးခဲ့ပါ၊ (i) သင် ကုမ္ပဏီ၏ကွန်ယက်၏အခြားအကောင့်တစ်ခုမှယခင်ကမိမိကိုယ်ကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းမပြုလုပ်ရပါ။ (ည) ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနိုင်ငံ၏အွန်လိုင်းလောင်းကစားခြင်းကိုယ်ပိုင်လောင်းကစားခြင်းအစီအစဉ်တွင် Gamstop ဟုလူသိများသည်။
သင်၏အကောင့်ကိုလောင်းကစားကော်မရှင် (ယူကေရှိဖောက်သည်များ) ကထိန်းချုပ်သည်ဆိုပါက၊ (၁) ရန်ပုံငွေများမသွင်းမီသင့်အကောင့်ကိုမှတ်ပုံတင် ID နှင့်အသက်စစ်ဆေးရမည်၊ (၂) လောင်းကစားခြင်း (သင်၏ကိုယ်ပိုင်ရန်ပုံငွေ၊ အပိုဆုကြေးနှင့်သို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်) လောင်းကစားခြင်း။ မည်သည့်အခမဲ့လှည့်ဖျားမှုများနှင့်အလောင်းအစားများမဆို၊ (၃) အခမဲ့ကစားနိုင်သည့်မည်သည့်ဂိမ်းကိုမဆိုရယူနိုင်သည်။ သင်၏အမည်၊ လိပ်စာနှင့်မွေးသက္ကရာဇ်ကိုအတည်ပြုရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အားအောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများ (သို့မဟုတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောထပ်ဆောင်းစာရွက်စာတမ်းများ) တစ်ခု (သို့မဟုတ်) တစ်ခုထက် ပို၍ ပြရန်သင့်အားတောင်းဆိုနိုင်သည်
အထောက်အထားသက်သေ - သင်၏ပထမ ဦး ဆုံးငွေသွင်းရန်အတွက်တရားဝင်ဓာတ်ပုံအထောက်အထားလိုအပ်သည်။ ID သည်မှန်ကန်သောနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် (သို့) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ သင်၏အမည်၊ ဓာတ်ပုံနှင့်လက်မှတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့ထံပို့သောမိတ္တူပေါ်တွင်ပါရမည်။ အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်သင်၏စာရွက်စာတမ်းများကိုတရား ၀ င်အထောက်အထားအဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မီသော notary (သို့) ရှေ့နေကလက်မှတ်ထိုးပြီးတံဆိပ်ခေါင်းယူရန်တောင်းဆိုနိုင်သည်။
လိပ်စာအထောက်အထား - ၎င်းသည်သင်၏အကောင့်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းသင်၏အမည်နှင့်လိပ်စာအပြည့်အစုံကိုပြသသည့်မကြာသေးမီက utility bills သို့မဟုတ် debit ကဒ်ဖော်ပြချက်ပုံစံမျိုးဖြစ်နိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်၏အကောင့်ကို Malta Gaming Authority မှထိန်းချုပ်သည်ဆိုပါကသင်သည်အကြွေးဝယ်ကဒ် (သို့) e-wallet အပြင်အခြားငွေပေးချေမှုပုံစံကို အသုံးပြု၍ ငွေသွင်းပြီး၊ အသက်နှင့်ပတ်သက်သောစိစစ်ခြင်းသည်သင့်အတွက်ကျေနပ်လောက်အောင်မပြီးနိုင်လျှင်၊ (၁) သင်၏အကောင့် (၂) အသက်စစ်ဆေးခြင်းကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသည်အထိသင်၏အကောင့်မှလောင်းကစားခြင်းကိုထပ်မံခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်၊ ကုမ္ပဏီသည်သင့်ထံမှအသက်အထောက်အထားကိုအချိန်မရွေးတောင်းခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အကယ်၍ စိတ်ကျေနပ်လောက်သောသက်သေအထောက်အထားကိုမပြပါကအထက်ဖော်ပြပါအကျိုးဆက်များကို mutatis mutandis သက်ရောက်လိမ့်မည်။ သင် (၁၈) နှစ်အောက် (သို့) သင်နေထိုင်သည့်နိုင်ငံ၏ဥပဒေများအရသတ်မှတ်ထားသည့်အသက် (၁၈) နှစ်အောက်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိပါကကုမ္ပဏီသည်သင်၏အကောင့်ကိုပိတ်ပြီးသင့်အားရန်ပုံငွေအားလုံးကိုပြန်လည်ပေးအပ်မည် ငွေဖြည့်သည်။ သို့သော်အပိုဆုများ၊ အနိုင်ရရှိမှုများနှင့်အပိုဆုကြေးများကိုပေးဆောင်မည်မဟုတ်ပါ။
ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အခြားစည်းမျဉ်းများမှသွေဖည်ခြင်းမရှိဘဲ၊ အကယ်၍ သင်သည်တရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် / သို့မဟုတ်မမှန်မကန်ကစားခြင်းပုံစံများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ဟုကုမ္ပဏီကဆုံးဖြတ်သည်သို့မဟုတ်ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ကြိုးပမ်းလျှင်ကုမ္ပဏီသည်သင့်အားသင်၏ပိတ်သိမ်းခွင့်ရှိသည်။ သင်၏အကောင့်ရှိငွေအားလုံးကိုအကောင့်သိမ်းပါ၊ သိမ်းယူသိမ်းယူသိမ်းယူပါ (သင့်အကောင့်ရှိငွေသွင်းခြင်းနှင့်နိုင်ငွေများအပါအ ၀ င်) ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ကုမ္ပဏီ၏ကွန်ရက်ပေါ်ရှိသင်၏အကောင့်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဤအခွင့်အရေးများကိုကျင့်သုံးနိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီသည်သင်နှင့်သင်၏လုပ်ဆောင်မှုများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ဘဏ္institutionsာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဘဏ်များ၊
"တရားမဝင်လုပ်ဆောင်ချက်များ" သည်တရားမဝင်၊ တရားမဝင်သော၊ လိမ်လည်မှုသို့မဟုတ်အခြားမလျော်ကန်သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုဆိုလိုသည်။
စက်ရုပ်နှင့် / သို့မဟုတ်အတုထောက်လှမ်းရေးကဲ့သို့သောစက်ပစ္စည်းများနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲများအသုံးပြုခြင်း၊
ပွဲစဉ်ကိုပြင်ဆင်ခြင်း (သို့) ပွဲတစ်ခုနှင့် (သို့) အလောင်းအစား၏ရလဒ်ကိုသက်ဆိုင်သောဥပဒေနှင့် / သို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာအဖြစ်အပျက်များ၏စည်းမျဉ်းများနှင့်ဆန့်ကျင်သောမည်သည့်အလောင်းအစား၏ရလဒ်ကိုမဆိုလွှမ်းမိုးခြင်းအပြင်ဆိုက်ကိုချိုးဖောက်ခြင်းသို့မဟုတ်အလားတူပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားခြင်း၊
မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်ဖြည့်ဆည်းခြင်း၊ / သို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏စနစ်များကိုကျော်လွှားခြင်း၊ ၀ င်ရောက်ခြင်း၊ ၀ င်ရောက်ရန်ကြိုးစားခြင်း၊ မပြည့်စုံသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် / သို့မဟုတ်ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီသို့အတည်ပြုအချက်အလက်များနှင့် / သို့မဟုတ် virtual private network connection ကိုအသုံးပြုခြင်း။
သင်အသုံးပြုသောရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်သည်တရားမ ၀ င် / (သို့) ငွေကြေးခ ၀ ါချခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောမည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုတွင်မဆိုပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း (သို့) သင်လုပ်ကိုင်ကောင်းပြုနိုင်သည့်နေရာ၊
အခြားကစားသမား (များ) နှင့် (သို့) ကျွန်ုပ်တို့ကိုထိခိုက်နစ်နာစေနိုင်သည့်အလွဲသုံးစားမှု၊
တိနှင့် / သို့မဟုတ်မမှန်ကန်သောစာရွက်စာတမ်းများထောက်ပံ့ခြင်း၊
ရှုံးနိမ့်မှုများကိုလျှော့ချရန်သင်ကုမ္ပဏီသည်အပိုဆုကြေးများကိုမမျှတစွာအကျိုးအမြတ်ယူနေသည်ဟုကုမ္ပဏီမှသင့်တော်သောသံသယရှိလျှင် (သို့) ပိုင်ဆိုင်သောနှင့် (သို့) လည်ပတ်နေသောဆိုဒ်များတွင်အပိုဆုကြေးတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကုမ္ပဏီ; ဒါမှမဟုတ်
ကျွန်ုပ်တို့၏အပိုဆုကြေးများကိုလိမ်လည်လှည့်စားခြင်းအားဖြင့်၎င်းတွင်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိပါက - (၁) မည်သည့်ဆိုက်တွင်မဆိုအပိုဆုကြေးအမြောက်အမြားရရှိရန် ခွဲခြား၍ မရသောအကောင့်မျိုးစုံကိုဖွင့်ခြင်း၊ မြှင့်တင်ရေးလှုပ်ရှားမှုအတွင်းငွေသွင်းခြင်း (သို့) ကွန်ယက်တစ်ခုလုံးတွင်အကောင့်မျိုးစုံဖွင့်ခြင်း၊ အခမဲ့ဂိမ်းများနှင့်အကြိမ်ကြိမ်ထပ်ခါတလဲလဲငွေသွင်း / ငွေထုတ်ခြင်း / ပြန်လည်အပ်နှံခြင်းအကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်သောပုံစံတွင်အကြွေးနှင့်သက်ဆိုင်သောအပိုဆုကြေးရရန်ရည်ရွယ်သည်။
"မမှန်သည့်ကစားနည်းပုံစံများ" တွင်ပါဝင်သင့်သော်လည်းအောက်ပါလုပ်ဆောင်မှုများကိုကန့်သတ်ထားသည် -
တန်းတူသုည (သို့) အနိမ့်ဆုံးအနားသတ်လောင်းများ (သို့) အလွှာအလောင်းအစားများ၊
လောင်းကြေးတစ်ခုတည်း (သို့မဟုတ်) မျိုးစုံသောလောင်းကြေးများကိုငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်း (သို့) ထိုထက်ပိုသောလောင်းကြေးတစ်ခုအားမည်သည့်ဂိမ်း၊
ချိန်ခွင်လျှာကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်သိသိသာသာပြောင်းလဲနေတဲ့ကစားပုံစံများ; ဥပမာအားဖြင့်အလောင်းအစားသို့မဟုတ်လောင်းကြေးပမာဏ၊ ဂိမ်းအမျိုးအစားများနှင့်လောင်းကစားခြင်း (သို့မဟုတ်) လောင်းကြေးပုံစံများစသည်တို့ဖြစ်သည်။
ကြီးမားသောအလောင်းအစားများသို့မဟုတ်လောင်းကြေးများထားခြင်းအားဖြင့်အမြတ်အစွန်းများစွာရရှိပြီးနောက်လောင်းကြေး (သို့) အလောင်းအစားအရွယ်အစားသည်ယခင်ပျမ်းမျှလောင်းကြေး (သို့) လောင်းကြေးပမာဏ၏ ၆၅၁TP1T ထက်ကြီးသည်သို့မဟုတ်မြင့်မားသည်။
အလောင်းအစားများ (သို့မဟုတ်) အလောင်းအစားလောင်းခြင်းများပြုလုပ်ပြီးလောင်းခြင်းလိုအပ်ချက်ကိုပြည့်မီရန်အလောင်းအစားများ (သို့မဟုတ်) ကစားသမားများကိုသိသိသာသာလျှော့ချခြင်း၊
လိုအပ်ချက်နှင့်တွေ့ဆုံရန်အတွက်ကြီးမားသောအနိုင်ရရှိပြီးနောက်အနိမ့် weighted ဂိမ်းမှမြင့်မားသော weighted ဂိမ်းသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်း,
ကစားပွဲအတွက်အောက်ပါကိစ္စများတွင် - (က) ရရှိနိုင်သောနံပါတ် ၃၇ ခုမှ ၂၄ ခုနှင့်အထက်ကိုဖုံးအုပ်နိုင်သည်။ (ခ) အနီရောင်နှင့်အနက်ရောင်အလောင်းအစားများ၊ (ဂ) အလေးသာမှုနှင့်ပွဲအတွက်လောင်းခြင်း၊ ()) ၁ - ၁၈၊ ၁၉ - ၃၆ (အားလုံးပါ ၀ င်နိုင်သည့်) လောင်းကစားခြင်း၊ (င) ဇယားကွက်၏ကော်လံသုံးခုစလုံးကိုလောင်းခြင်း၊ (စ) ဒါဇင်သုံးဆယ်စလုံးအတွက်လောင်းခြင်း၊
အခြားကစားသမားတစ် ဦး အားအခွင့်ကောင်းဖြစ်စေရန်သို့မဟုတ်အခြားကစားသမားများသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်စပ်လျဉ်း။ မည်သည့်လိမ်လည်မှုကိုမဆိုပြုလုပ်ရန်အတွက်အကောင့်တစ်ခုသို့မဟုတ်အကောင့်အုပ်စုတစ်စုသည်စနစ်တကျလည်ပတ်ခြင်း - ဥပမာအားဖြင့်အခြားကစားသမားများကိုလိမ်လည်ရန်သို့မဟုတ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အနေဖြင့်ကစားခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ;
အနိမ့်အလေးသာမှုများအပေါ်သင်၏တကယ့်ငွေပမာဏ၏ပမာဏသို့မဟုတ်များသောအားဖြင့်လောင်းကစားခြင်းလောင်းကစားရုံလောင်းကစားများနှင့် / သို့မဟုတ်အပိုဆုကြေးများလောင်းခြင်းသင်၏လောင်းကြေးငွေကို သုံး၍ လောင်းခြင်း။ နှင့် / သို့မဟုတ်
သင်၏ကန ဦး အပ်ငွေ၏ 25% ထက်ပိုသောလောင်းကြေးတစ်ခုသို့မဟုတ်လောင်းကြေးတစ်ခုအဖြစ်ထားပါ။
သင်၏အကောင့်ထဲရှိမည်သည့်ငွေကိုမဆိုမတော်လျော်သောနည်းလမ်းများဖြင့်ငွေသွင်းခြင်းမှာတရားမ ၀ င်ပါ။ အထက်ဖော်ပြပါအချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ သွေဖည်ခြင်းမရှိဘဲကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ငွေကြေးခ ၀ ါချမှုကိုကာကွယ်ရန်အရောင်းအ ၀ ယ်အားလုံးကိုစစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပြီးသံသယဖြစ်ဖွယ်အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များထံတင်ပြမည်ဖြစ်ကြောင်းသင်အသိအမှတ်ပြုပါသည်။
အောက်ဖော်ပြပါငွေသွင်းနည်းစနစ်များကိုကုမ္ပဏီသို့ငွေသွင်းနိုင်သည်။ ခရက်ဒစ် (ယူကေတွင်မရရှိနိုင်) နှင့်ဒက်ဘစ်ကဒ်၊ ငွေလွှဲခြင်း၊ Neteller၊ PayviaPhone, Paysafecard, ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ Skrill၊ Ecopayz နှင့် Fast BankTransfer ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းတိုင်း၏ရရှိနိုင်မှုသည်သင်၏မှတ်ပုံတင်သည့်နိုင်ငံနှင့်ရွေးချယ်ထားသောငွေကြေးအပေါ်မူတည်သည်။ သင့်၏ငွေစာရင်းအားကုမ္ပဏီမှအတည်ပြုပြီးမှသာသက်ဆိုင်ရာငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုအတည်ပြုပြီးမှသာသင်၏အကောင့်ကိုငွေသွင်းလိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောအတည်ပြုချက်ကိုလက်ခံရရှိသည်အထိ, သင့်အကောင့်အကောင့်ရဲ့လက်ကျန်ငွေ၌ထိုကဲ့သို့သောသိုက်မပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အကြွေးမပေး၊ ချေးငွေပေးခြင်းတွင်ပါ ၀ င်ခြင်း၊ စီစဉ်ခြင်း၊ PayviaPhone မှပြုလုပ်သောအပ်ငွေများတွင်သင်၏အပ်ငွေပမာဏမှနှုတ်ယူမည့် 15% အပြောင်းအလဲအတွက်အခကြေးငွေရှိသည်။
သံသယမဖြစ်စေရန်သင်၏အကောင့်ကိုလောင်းကစားကော်မရှင်ကထိန်းချုပ်ထားပါက e-wallet သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှု ၀ န်ဆောင်မှုတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောမည်သည့်ခရက်ဒစ်ကဒ်မှတစ်ဆင့်သင်၏အကောင့်ထဲသို့ငွေသွင်းရန်ခရက်ဒစ်ကဒ်ကို သုံး၍ မရပါ။
ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ကုမ္ပဏီ၏သန္နိdeposit္ဌာန်အတိုင်းအချို့သောအပ်ငွေကန့်သတ်ချက်များချမှတ်ခြင်းသည်ကုမ္ပဏီမှပြုလုပ်သောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်းများကိုလိုက်နာခြင်းကြောင့်သင်၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှဖောက်သည်များနှင့်အပ်ငွေတစ်ခုနှင့်သက်ဆိုင်သောအမျိုးမျိုးသောဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အညီကွဲပြားနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် Paysafecard - ဆိုက်တစ်ခုစီအတွက်ပေါင် ၁၀ ပေါင်မှ ၇၀၀ အထိရှိသည်။
လောင်းကစားကော်မရှင် (ယူကေရှိဖောက်သည်များ) သည်၎င်း၏အကောင့်အားလောင်းကစားကော်မရှင်မှစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည့်မည်သူ့ကိုမဆိုကုမ္ပဏီ၏ငွေစာရင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိအကြောင်းကြားရန်ကုမ္ပဏီသည်လောင်းကစားကော်မရှင်မှထုတ်ပေးသောလိုင်စင်ဖြင့်လိုအပ်သည်။ ကွှေးမွီမဆပျနိုငျသော၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ရန်ပုံငွေများကိုကာကွယ်ထားကြသည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ကုမ္ပဏီ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်ပိုင်အကောင့်များနှင့်ခွဲထားရန်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောဖောက်သည်များ၏ရန်ပုံငွေကိုသီးခြားဘဏ်အကောင့်တစ်ခုတွင်ကိုင်ထားရမည်။ ကွှေးမွီမဆပျနိုငျသောဖြစ်ရပ်များတွင်ဤရန်ပုံငွေများကိုကာကွယ်မထားပါ။ ဤသည်မှာလောင်းကစားကော်မရှင်၏ဖောက်သည်ရန်ပုံငွေများကိုအဆင့်အတန်းခွဲခြားရန်လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်၊ သင်ဒီမှာနှိပ်ပါ - ဖောက်သည်ရန်ပုံငွေများကိုကာကွယ်ခြင်း.
ပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်အခိုးခံရသည့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုကုမ္ပဏီအားချက်ချင်းအကြောင်းကြားရန်သို့မဟုတ်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းပြောင်းလဲမှုအကြောင်းသင်၏တာ ၀ န်ဖြစ်သည်။ သင်၏ချက်ချင်းအကြောင်းကြားရန်သင်၏ပျက်ကွက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဆုံးရှုံးမှုများနှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုသင့်အားသာသင်သာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးလိမ့်မည်။ ထိုသို့သောဆုံးရှုံးမှုများနှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တာဝန်ယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
သင်၏အကောင့်မှငွေများကိုအခြားကစားသမားများသို့လွှဲပြောင်းရန်သို့မဟုတ်သင်၏အကောင့်ရှိအခြားကစားသမားများထံမှငွေများကိုလက်ခံရန်သို့မဟုတ်အခြားကစားသမားများထံမှငွေစာရင်းများကိုရောင်းချရန်၊ လွှဲပြောင်းရန်နှင့် / သို့မဟုတ်ဝယ်ယူရန်သင့်အားခွင့်မပြုပါ။
သင်၏အကောင့်ကို Malta Gaming Authority မှထိန်းချုပ်သည်ဆိုပါကသင်သည်သင်၏ (၁၂) လ (၁၂) လအတွက်သင်၏အကောင့်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းမပြုပါကမလှုပ်မရှားဖြစ်နေသောအကောင့်ဟုမှတ်ယူလိမ့်မည်။ သင်၏အကောင့်အားမလှုပ်မရှားမီရက် ၃၀ (၃၀) တွင်ကုမ္ပဏီကသင့်အားအကြောင်းကြားပါကမလှုပ်မရှားဖြစ်သောမည်သည့်အကောင့်ကိုမဆိုတစ်လလျှင်ယူရို ၅ (၅) နှင့်ညီမျှသောစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအခကြေးငွေပေးဆောင်ရမည်။ ထိုသို့မြှောက်ငွေသည်သင်၏အကောင့်၏လက်ကျန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏အကောင့်ထဲသို့လ (၃၀) (၃၀) လအတွင်းမဝင်ပါကသင်၏အကောင့်ကိုရပ်တန့်နေသောအကောင့်တစ်ခုအဖြစ်မှတ်ယူလိမ့်မည်။ ဤကိစ္စတွင်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်သင်၏အကောင့်၏လက်ကျန်ငွေကိုဤအပိုင်း၌ရည်ညွှန်းထားသည့်ကုန်ကျစရိတ်များလျှော့ချပြီးနောက်ငွေပြန်ထုတ်ရမည်။ ) သင်၊ သို့မဟုတ်သင်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောနေရာတွင်မရရှိနိုင်ပါက - Malta Gaming Authority သို့) ။
(ဂလောင်းကစားကော်မရှင်ကသင်၏အကောင့်ကိုစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားပါကအသုံးမပြုနိုင်ပါ) အပိုင်း G.8 အရသင်၏အကောင့်သည်ရပ်တန့်နေသောအကောင့်တစ်ခုသို့မဟုတ်မလှုပ်မရှားသောအကောင့်ဖြစ်လာသည့်မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုထပ်မံအသုံးပြုခြင်းမှပိတ်ဆို့ခြင်းခံရပြီး၊ သင်၏အကောင့်တွင်ရှိသောငွေကြေးအားလုံးကိုသိမ်းယူသိမ်းဆည်းရန်ကုမ္ပဏီ၏အခွင့်အရေး၊ သင်သည်ကုမ္ပဏီနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည် customersupport@instantgamesupport.com သင်၏အကောင့်ကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန်နှင့်သို့မဟုတ်သင်၏အကောင့်၏လက်ကျန်ငွေကိုပြန်ပေးရန်တောင်းဆိုရန်တင်ပြပါ။ သံသယကိုရှောင်ရှားရန်သင်၏ကုမ္ပဏီသည်သင်၏တောင်းဆိုချက်ကိုလက်ခံရန်တာ ၀ န်မရှိပါ။ ထိုတောင်းဆိုချက်ကိုသက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့်အခြေအနေများ၊ ဤစည်းကမ်းချက်များနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီပြန်လည်သုံးသပ်ပါမည်။
ဤအခန်း၏အခန်း (၆) ပုဒ်မ G.8 နှင့် G.9 သည်လောင်းကစားကော်မရှင် (ယူကေရှိဖောက်သည်များ) မှစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်သည့်အကောင့်တစ်ခုနှင့်မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။ မည်သည့်ထိုကဲ့သို့သောအကောင့်မလှုပ်မရှားသို့မဟုတ်အိပ်ပျော်ဖြစ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ကုမ္ပဏီ၏ပုံမှန်သုံးစွဲသူသမိုင်းတင်ဆက်မှုသည်ဂိမ်းသမိုင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်၏ကစားပွဲမှတ်တမ်းအားလုံးကိုရယူလိုပါကကုမ္ပဏီ၏ဖောက်သည်များ၏အကူအညီကိုဆက်သွယ်ပါ customersupport@instantgamesupport.com,
အလောင်းအစားလုပ်ပြီးပါက ပြောင်းလဲ၍ မရပါ။
ပွဲအပြီးတွင်လောင်းသောအလောင်းအစား (ကစားပွဲလောင်းကစားခြင်းအတွက်အသာထား) နှင့် / သို့မဟုတ်အလောင်းအစား၏ရလဒ်အပြီးတွင်လောင်းထားသောလောင်းခြင်းသည်မမှန်ကန်ပါ။ ထိုအလောင်းအစားမှမည်သည့်အနိုင်ငွေကိုသင့်အားမရစေရ။ လောင်းကြေးငွေပမာဏကိုသင့်အနေဖြင့်ပြန်လည်ပေးအပ်မည်။
အချို့သောပွဲများရှိအချို့သောလောင်းကစားများ၌ကုမ္ပဏီမှတစ်ခုတည်းသောအကြွင်းမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ငွေသားထုတ်ယူခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤအင်္ဂါရပ်ကိုကမ်းလှမ်းပါကသင်လောင်းခဲ့သောပွဲမကုန်မီသင်၏အလောင်းအားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို (သို့) သင်၏ငွေအားလုံးကိုငွေသားထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ Cash-out feature အရသင့်အားပြန်လည်ပေးအပ်သည့်အခကြေးငွေသည်ပွဲစဉ်အတွင်းပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ ကုမ္ပဏီက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်ပွဲနှင့် / သို့မဟုတ်လောင်းကြေးတွင်မဆိုငွေထုတ်ပေးရန်တာ ၀ န်မရှိပါ။ ၎င်းကိုအကြောင်းကြားရန်မလိုဘဲဤအင်္ဂါရပ်ကိုလုံးဝဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။
အလောင်းအစား၏ရလဒ်ကိုပွဲများစီစဉ်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အခြားသတင်းအချက်အလက်ရင်းမြစ်များအရစီစဉ်သောသက်ဆိုင်သောအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှထုတ်ပြန်သောတရားဝင်ရလဒ်များနှင့်အညီကုမ္ပဏီမှအတည်ပြုသည်။ တရားဝင်ရလဒ်များနှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်ရင်းမြစ်များအကြားပaိပက္ခဖြစ်ပွားသည့်အခါကုမ္ပဏီသည်အလောင်းအစား၏ရလဒ်ကိုဆုံးဖြတ်ရမည်။ အကယ်၍ ကုမ္ပဏီသည်အလောင်းအစား၏ရလဒ်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိပါကထိုအလောင်းအစားသည်ပျက်ပြယ်ပြီးအလောင်းအစားကိုသင့်ထံပြန်အပ်လိမ့်မည်။
ပုဒ်မ G.16 အရကုမ္ပဏီသည်အလောင်းအစား၏ရလဒ်ကိုဆိုက်ပေါ်တွင်ဖော်ပြလိမ့်မည်။ ကုမ္ပဏီသည် (၇၂) နာရီအတွင်းအလောင်းအစား၏ရလဒ်ကိုကြေငြာပြီးကုမ္ပဏီမှ (၂၁) နာရီအတွင်းနိုင်ငွေ (အကယ်၍ ရှိလျှင်) ကိုနိုင်ငွေဖြင့်အသိအမှတ်ပြုရမည်။ ဆိုက်တွင်ထုတ်ပြန်ထားသောရလဒ်များနှင့်ကုမ္ပဏီ၏စနစ်များတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောရလဒ်များအကြား (သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများမှတတိယအဖွဲ့အစည်းများမှလည်ပတ်သောစနစ်များ) အကြားပconflictိပက္ခဖြစ်ပွားပါကအဆုံးစွန်သည်အောင်မြင်ရမည်။
သင်သည်သင်၏အမှန်တကယ်ငွေလက်ကျန် (သင်၏အပ်ငွေနှင့်အပ်ငွေမှရရှိသောမည်သည့်အနိုင်ငွေကို) မဆိုအချိန်မရွေးထုတ်ယူနိုင်သည် - လိုအပ်သောနေရာများ မှလွဲ၍ ယေဘုယျစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုလိုက်နာရန်။
သင်သည်ငွေထုတ်ရန်တောင်းဆိုသည့်အခါတောင်းခံထားသောရန်ပုံငွေများကိုသင်ကန ဦး သွင်းရန်အသုံးပြုသောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်း (များ) သို့လွှဲပြောင်းလိုက်သည်။
သင့်တွင်ထူးခြားသောသိုက်များရှိပါကကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အပ်ငွေအားလုံးကိုလက်ခံအတည်ပြုပြီးသည်အထိငွေပေးချေမှုကိုရွှေ့ဆိုင်းရန် (သို့) ရပ်ဆိုင်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသီးခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်တွင်ပေးအပ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ပါကဆုတ်ခွာခြင်းအပေါ်သင့်လျော်သောအပြောင်းအလဲရှိသည့်အခကြေးငွေ (အပိုင်း ၆) တွင်ဖော်ပြထားသည်ထက်ကျော်လွန်ပါက) သင့်အားငွေပေးချေနိုင်သည်။
ပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်ခိုးယူခံရသည့်ခရက်ဒစ် / ဒက်ဘစ်ကဒ်သို့မဟုတ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအီး - ပိုက်ဆံအိတ်သို့ပြောင်းလဲခြင်းအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားချက်ချင်းအကြောင်းကြားရန်မှာသင်၏တာဝန်ဖြစ်သည်။ သင်၏ဘက်မှချက်ချင်းအကြောင်းကြားရန်သင့်ဘက်မှပျက်ကွက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဆုံးရှုံးမှုများနှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုသင်မှသာသင့်အားပေးလိမ့်မည်။ ထိုသို့သောဆုံးရှုံးမှုများနှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တာ ၀ န်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
ထုတ်ယူခြင်းများသည်ထုတ်ယူခြင်းအတွက်ငွေပမာဏမှာယူရို ၂.၅၀ ဖြစ်သည်။
ပြည်တွင်းထုတ်ပေးသူကန့်သတ်ချက်များကြောင့်ဗီဇာခရက်ဒစ် (ယူကေတွင်မရရှိနိုင်) နှင့်ဒက်ဘစ်ကဒ်ငွေထုတ်ယူမှုအချို့နိုင်ငံများတွင်မရရှိနိုင်ပါ။
ထုတ်ပေးသူ၏ကန့်သတ်ချက်များကြောင့် MasterCard နှင့် debit ကဒ်ထုတ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိပါ။
Skrill, Webmoney နှင့် Qiwi များသည်ငွေပေးချေမှုကိုယခင်ကအောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့လျှင်ငွေထုတ်ရန်သာရွေးချယ်လိမ့်မည်။
ထပ်မံသိရှိလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးစွဲသူအထောက်အပံ့ကို LiveChat မှတဆင့်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ customersupport@instantgamesupport.com
သင်၏အကောင့်ကို Malta Gaming Authority မှထိန်းချုပ်သည်ဆိုပါကအကောင့်တစ်ခုအတွက်အများဆုံးငွေထုတ်ရန်ပမာဏမှာ (၁) တစ်ပတ်လျှင်ပေါင် (၃၀၀၀) နှင့် (၂) တစ်လလျှင်ပေါင် ၆၀၀၀ ဖြစ်သည်။ တိုးတက်သော jackpots ဖြစ်လျှင်အနိုင်ရရှိငွေများကိုတစ်ပြိုင်တည်းထုတ်ယူနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးထားသောကစားသမားများကိုဤကန့်သတ်ချက်များကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။
သင်၏အကောင့်ကိုလောင်းကစားကော်မရှင် (ယူကေရှိဖောက်သည်များ) ကသတ်မှတ်သည်ဆိုပါကငွေသွင်းခြင်းအတွက်အသုံးပြုသောသင်၏ငွေပေးချေမှုပုံစံကိုမည်သည့်ထုတ်ယူမှုမဆိုမပြုလုပ်မီစစ်ဆေးရမည်။ သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အားအောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများ (သို့မဟုတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောထပ်ဆောင်းစာရွက်စာတမ်းများ) တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက် ပို၍ ပြသရန်တောင်းဆိုနိုင်သည်။
ငွေသွင်းလျှင်သို့မဟုတ်ငွေထုတ်ယူလျှင်သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုခဲ့သောကဒ်၏ရှေ့နှင့်နောက်ကျောကိုဖြည့်ပါ။ သင်၏ကဒ်၏ပထမနှင့်နောက်ဆုံးလေးလုံး၊ သင်၏အမည်နှင့်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်နေ့ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရပါမည်။ လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်များအရအလယ်တန်း ၈ လုံးနှင့် CVV ကုဒ်များကိုသင်ဖုံးလွှမ်းနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ E-Wallet မှငွေအပ်နှံခြင်းသို့မဟုတ်ဆုတ်ခွာခြင်းခံရပါကသင်၏နာမည်နှင့်အီးမေးလ်ကိုပြသသည့် e-Wallet ၏ပရိုဖိုင်စာမျက်နှာမျက်နှာပြင်သို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံကိုပေးပါ။
အခြားနည်းလမ်းများမှတဆင့်အပ်နှံပါကသင်၏အမည်ကိုပြသည့်နည်းလမ်း၏ဓာတ်ပုံ (သို့) ပုံရိပ်ကိုပေးပါ။
အကယ်၍ သင်၏အကောင့်ကို Malta Gaming Authority မှထိန်းချုပ်ထားပါက၊ ပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းမပြုမီကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ခါတစ်ရံမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်လိုအပ်နိုင်သည်။ သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အားအောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများ (သို့မဟုတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောထပ်ဆောင်းစာရွက်စာတမ်းများ) တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက် ပို၍ ပြသရန်တောင်းဆိုနိုင်သည်။
သင်၏အကောင့်ကိုအသုံးပြုသောအကြွေး / ဒက်ဘစ်ကဒ် - ကဒ်၏နှစ်ဖက်စလုံး၏ရှင်းလင်းပြတ်သား။ ရှင်းလင်းပြတ်သားသောမိတ္တူတစ်ခုလိုအပ်သည်။ လုံခြုံရေးအတွက်ကြောင့်ကဒ်၏အရှေ့ဘက်ရှိအလယ်နံပါတ်ရှစ်နံပါတ်များနှင့်ကဒ်မိတ္တူ၏နောက်ဖက်ရှိဂဏန်းသုံးလုံးကုဒ်ကိုဖြတ်ထုတ်ရမည်ဖြစ်သည်။
လိပ်စာအထောက်အထား - ဤသည်မှာသင်၏အကောင့်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းသင်၏အမည်နှင့်လိပ်စာအပြည့်အစုံကိုပြသသည့်မကြာသေးမီကအသုံးအဆောင်ငွေတောင်းခံလွှာသို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်ကဒ်ထုတ်ပြန်ချက်ပုံစံမျိုးဖြစ်နိုင်သည်။
အထောက်အထားအထောက်အထား - သင်၏ပထမဆုံးထုတ်ယူမှုကိုလုပ်ဆောင်ရန်တရားဝင်ဓာတ်ပုံအထောက်အထားလိုအပ်သည်။ ID သည်မှန်ကန်သောနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် (သို့) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ သင်၏အမည်၊ ဓာတ်ပုံနှင့်လက်မှတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့ထံပို့သောမိတ္တူပေါ်တွင်ပါရမည်။ အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်သင်၏စာရွက်စာတမ်းများကိုတရား ၀ င်အထောက်အထားအဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မီသော notary (သို့) ရှေ့နေကလက်မှတ်ထိုးပြီးတံဆိပ်ခေါင်းယူရန်တောင်းဆိုနိုင်သည်။
ငွေသွင်းခြင်း / ကစားခြင်းနှင့်ကစားခြင်းအတွက်သင်အသုံးပြုသောသင်၏အရင်းအမြစ်နှင့်ကြွယ်ဝမှုကိုခွဲခြားသိမြင်နိုင်ဖို့အထောက်အကူပြုရန်နောက်ထပ်စာရွက်စာတမ်းများကိုအချိန်မရွေးတောင်းခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့်အလားတူကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ သင်၏စာရွက်စာတမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများပေါ်ပေါက်လာပါကကုမ္ပဏီသည် notarized documents များကိုတောင်းခံနိုင်ပြီးနောက်ထပ်အသိပေးခြင်းမတိုင်မီသင့်အကောင့်ကို (အတွင်း၌ထည့်သွင်းထားသည့်ရန်ပုံငွေများအားလုံးအေးခဲစေခြင်း) ကိုရပ်ဆိုင်းနိုင်သည်။
ငွေထုတ်ယူလိုပါက "ငွေကိုင်" icon ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးလျှင် "Withdrawal" option ကိုနှိပ်ပါ။ ရွေးချယ်လိုသောထုတ်ယူသည့်နည်းလမ်းနှင့်သက်ဆိုင်သောပုံစံကိုဖြည့်ပါ၊ “ နုတ်ထွက်ရန်” ကိုနှိပ်ပါ။
ငွေသားထုတ်ယူခြင်းတောင်းခံချက်အားလုံးသည်လုပ်ငန်းခွင်သုံးရက်အတွက် "ဆိုင်းငံ့ထားသော" အဖြစ်ပေါ်လာမည်ဖြစ်ပြီးထိုတောင်းဆိုမှုကိုသင်ပယ်ဖျက်နိုင်သည်။ သင်၏ထုတ်ယူခြင်းကိုပယ်ဖျက်လိုပါက Cancel Withdrawal tab သို့သွားပြီးသင်၏ငွေထုတ်ပမာဏဘေးရှိ "Cancel" ကိုနှိပ်ပါ။
သုံးရက်အကြာတွင်သင်၏ပြန်လည်ထုတ်ယူရန်တောင်းဆိုမှုအခြေအနေသည်“ ထုတ်ယူခြင်း” သို့ပြောင်းလဲသွားပြီးသင်ဖျက်သိမ်းနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏တောင်းဆိုချက်ကိုပေးပို့ပြီးရန်ပုံငွေများကိုသင့်ထံလွှဲပြောင်းပြီးသည်နှင့်သင်အီးမေးလ်အကြောင်းကြားစာတစ်ခုကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
ထုတ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်အခြားကိစ္စရပ်များအတွက်အကူအညီအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။ သင်၏အကောင့်မှရန်ပုံငွေများကိုထုတ်ယူရန်သင်အသုံးပြုနိုင်သောနည်းလမ်းများမှာခရက်ဒစ် (ယူကေတွင်မရရှိနိုင်) နှင့်ဒက်ဘစ်ကဒ်၊ Neteller၊ Paysafecard, Skrill, Trustly, Ecopayz, Euteller, Qiwi, Webmoney နှင့် Bank Transfer တို့ဖြစ်သည်။
၀ န်ဆောင်မှုများသည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖျော်ဖြေမှုအတွက်ဖြစ်ကြောင်းအမြဲတမ်းသတိရပါ။ သူတို့သည်သင့်ကိုနေ့ချင်းညချင်းချမ်းသာကြွယ်ဝရန်မရည်ရွယ်ပါ။ သင်၏ငွေကိုဂရုစိုက်ပြီးဂိမ်းစည်းမျဉ်းများကိုသိအောင်လုပ်ပါ။ သင့်အားတာဝန်သိစွာလောင်းကစားခြင်းရှိစေရန် https://www.gamblersanonymous.org.uk/, http://www.gamcare.org.uk/ သို့မဟုတ်အလားတူဝက်ဘ်ဆိုက်များရှိသတင်းအချက်အလက်များကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ၀ န်ထမ်းများအားတာ ၀ န်ခံမှုရှိရှိဖြင့်လောင်းကစားခြင်း (သို့) အခြားသတိပေးချက်များနှင့် / သို့မဟုတ်ကြာချိန်၊ လောင်းကစားများနှင့်လောင်းကစားတွင်အရှုံးကန့်သတ်ခြင်းစသည့်တာ ၀ န်ယူမှုကို ဦး တည်သည့်အစီအမံများကိုသင်အသုံးချသည်။ ငွေကန့်သတ်ချက်များ၊ လောင်းကြေးကန့်သတ်ချက်များ၊ မည်သည့်ကန့်သတ်ချက်ကိုမဆိုလျှော့ချလိုက်လျှင်ချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မည်ဖြစ်ပြီးအကန့်အသတ်တိုးလာခြင်းသည်အကျိုးသက်ရောက်ခြင်းမပြုမီခုနစ်ရက် (သို့မဟုတ်သင်၏အကောင့်ကိုလောင်းကစားကော်မရှင်မှစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားပါက ၂၄ နာရီ) ကြာမည်ဖြစ်သည်။
သင်၏အကောင့်ကို Malta Gaming Authority မှထိန်းချုပ်သည်ဆိုပါကမည်သည့်ကန့်သတ်ချက်ကိုမဆိုလျှော့ချခြင်းသည်ချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်ပြီးမည်သည့်ကန့်သတ်ချက်ကိုမဆိုစတင်မစတင်မှီခုနစ်ရက်ကြာမြင့်မည်ဖြစ်သည်။ သင်သည် ၀ န်ဆောင်မှုများအသုံးပြုခြင်းကိုအတိအကျဖြစ်စေ၊
သင်၏အကောင့်ကိုလောင်းကစားကော်မရှင် (ယူကေရှိဖောက်သည်များ) ကထိန်းချုပ်ထားပါကမည်သည့်ကန့်သတ်ချက်ကိုမဆိုလျှော့ချခြင်းသည်ချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်ပြီးမည်သည့်ကန့်သတ်ချက်ကိုမဆိုတိုးမြှင့်ခြင်းမပြုမီ ၂၄ နာရီကြာမည်ဖြစ်သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုများအသုံးပြုခြင်းမှသင်ကိုယ်တိုင်အနည်းဆုံးခြောက်လမှ ၁၂ လအထိ (သင်ကသင်အားဖြင့်အနည်းဆုံးခြောက်လတစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောကာလအထိတိုးချဲ့နိုင်သည်) အတွက်သင့်ကိုယ်သင်ဖယ်ထုတ်နိုင်သည်။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည် (ဤအခန်းတွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း) မိမိကိုယ်ကိုဖယ်ထုတ်။ အအေးပေးစနစ်များကိုကမ်းလှမ်းသည်။ ကွန်ပျူတာတစ်ခုစီကိုအွန်လိုင်းလောင်းကစားဝက်ဘ်ဆိုက်များဖြစ်သော www.cyberpatrol.com သို့မဟုတ် www.gamblock.com ကဲ့သို့သောကွန်ပျူတာများကိုတားဆီးသည့်ဆော့ဖ်ဝဲတည်ရှိမှုကိုလည်းသင်၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်လိုပါသည်။
ဖယ်ထုတ်ခြင်းတောင်းဆိုချက်ကို client interface ရှိတာဝန်ရှိသည့်ကစားနည်းကဏ္viaမှဖြစ်စေ (သို့) ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အထောက်အပံ့ကို ဆက်သွယ်၍ ဖြစ်စေcustomersupport@instantgamesupport.com), သင်၏ကုမ္ပဏီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အညီ။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖယ်ထုတ်ခြင်းတောင်းဆိုချက်ကိုအတည်မပြုမီသင့်ကိုသင်ဖယ်ထုတ်ခြင်း၏အကျိုးဆက်များနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုသင့်အားပေးလိမ့်မည်။ သင်ကကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖယ်ထုတ်ရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်၊ သင့်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ဖယ်ထုတ်ခြင်းအားလက်ရှိသင်အသုံးပြုသောဝေးလံသောလောင်းကစားဝိုင်းအော်ပရေတာများသို့တိုးချဲ့ရန်စဉ်းစားရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းပါသည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖယ်ထုတ်ခြင်းပြုလုပ်သည့်အချိန်တွင်မဆုံးဖြတ်ရသေးသောအလောင်းအစားများကိုပုံမှန်အချိန်အတိုင်းအတာများနှင့်နောက်ဆက်တွဲသက်ဆိုင်ပါကသင့်အားပေးချေသောငွေပမာဏများအရပုံမှန်နည်းလမ်းအတိုင်းဖြေရှင်းမည်။ မိမိကိုယ်ကိုဖယ်ထုတ်ထားသည့်အကောင့်လုပ်ကွက်များကိုသဘောတူထားသည့်ကိုယ်ပိုင်ဖယ်ထုတ်ခြင်းကာလအတွင်းဖျက်သိမ်း။ မရပါ။
မိမိကိုယ်ကိုဖယ်ထုတ်ရန်တောင်းဆိုမှုကိုအောက်ပါအတိုင်းပြုလုပ်သည် - (i) သင်၏အကောင့်ကိုပိတ်သိမ်းပြီးသင်၏အကောင့်တွင်ရှိသောငွေများကိုသင်ထံသို့ပြန်ပို့ပေးမည်။ (၂) မိမိကိုယ်ကိုဖယ်ထုတ်ရန်သင်၏တောင်းဆိုမှုကိုကုမ္ပဏီသို့တင်ပြပြီးသည်နှင့်အမြန်ဆုံးလျှင်သင် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်မည်သည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပစ္စည်းများမဆိုရပ်ဆိုင်းမည်။ သို့သော်၎င်းသည်ပထ ၀ ီနယ်မြေတစ်ခုနှင့်သင်သိပြီးသားမဟုတ်သည့်နေရာတွင်ပစ်မှတ်ထားသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်သက်ဆိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
သင်၏အကောင့်ကို Malta Gaming Authority မှထိန်းချုပ်ထားသည်ဆိုပါကသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖယ်ထုတ်ခြင်းကာလမည်မျှကြာသည်ဖြစ်စေ၊ ထိုကဲ့သို့သောကိုယ်ပိုင်ဖယ်ထုတ်ခြင်းကာလကုန်ဆုံးလျှင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖယ်ထုတ်ခြင်းအဆုံးသတ်မည်ဖြစ်ပြီးကုမ္ပဏီနှင့်သင်စတင်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပစ္စည်းများလက်ခံရရှိသည်။
အကယ်၍ သင်၏အကောင့်ကိုလောင်းကစားကော်မရှင် (ယူကေရှိဖောက်သည်များ) ကထိန်းချုပ်ထားပါကသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖယ်ထုတ်ခြင်းကာလအပြီးတွင်သင်သည်အပြုသဘောဆောင်သည့်အရေးယူခြင်းမပြုပါက (အကယ်၍ သင်လောင်းကစားပြုလုပ်ရန်) ထပ်မံလောင်းကစားရန်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပစ္စည်းများလက်ခံရန်သဘောတူခြင်း မှလွဲ၍ သင်အပြုသဘောဆောင်အရေးယူမှုများမပြုလုပ်ပါကသင့်အနေဖြင့်မည်သည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပစ္စည်းများမဆိုလက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ထပ်မံလောင်းကစားနိုင်ရန်အပြုသဘောဆောင်သည့်လုပ်ဆောင်မှုသည်သင့်အားထပ်မံလောင်းကစားခြင်းမပြုမီတစ်ရက်အလိုတွင်အေးအေးဆေးဆေးနေရမည်။
မိမိကိုယ်ကိုဖယ်ထုတ်ရန်တောင်းဆိုခြင်းတွင်သင်သည်ယခုနှင့်အနာဂတ်၌အပြည့်အဝနှင့်တိကျသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပေးရန်သဘောတူသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ဆိုက်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအသုံးပြုခြင်းကိုကန့်သတ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်မိမိကိုယ်ကိုဖယ်ထုတ်ရန်ရွေးချယ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖယ်ထုတ်ခြင်းကိုလိုက်နာရန်သေချာစေရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောကြိုးပမ်းမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုမည်။ သို့သော်မိမိကိုယ်ကိုဖယ်ထုတ်ရန်သဘောတူခြင်းအားဖြင့်သင်သည်မိမိကိုယ်ကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်အပြိုင်တာဝန်ရှိသည်ဟုသင်လက်ခံသည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်သည်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအသေးစိတ်ကိုပြောင်းလဲပြီးသို့မဟုတ်သင်မှားယွင်းသော၊ မတိကျသောသို့မဟုတ်မပြည့်စုံသောအွန်လိုင်းအပိုဆောင်းအွန်လိုင်းအကောင့်များမှတစ်ဆင့်လောင်းကစားပြုလုပ်နေပါကသင်ခံရမည်သို့မဟုတ်ထိခိုက်နိုင်သည့်နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်များသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာ ၀ န်မရှိပါ။ အသေးစိတ်သို့မဟုတ်သဘောတူညီခဲ့သည့်မိမိကိုယ်ကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းကိုကျော်လွှားရန်ကြိုးစားသည်။ မိမိကိုယ်ကိုဖယ်ထုတ်ခြင်း၊ အချိန်ကုန်ခြင်းသို့မဟုတ်အလားတူလုပ်ရပ်များသည်ကုမ္ပဏီမှလုပ်ကိုင်သော ၀ ဘ်ဆိုဒ်အားလုံးတွင်တရားဝင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်အထက်ပါမေးခွန်းများမှတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက် ပို၍“ အဟုတ်” ကိုဖြေဆိုပါကသင့်အားဖောက်သည်အထောက်အကူပြုအဖွဲ့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
သင်၏အကောင့်ကိုလောင်းကစားကော်မရှင် (ယူကေရှိဖောက်သည်များ) ကထိန်းချုပ်ထားပါကလောင်းကစားအချိန်မှ ၁ ရက်မှ ၄၂ ရက်အတွင်းအေးချမ်းသည့်ကာလကိုသင်တောင်းဆိုနိုင်သည်။ အချိန်ကုန်အချိန်ကာလတစ်ခုအတွက်တောင်းဆိုမှုကိုတာ ၀ န်ရှိသည့်လောင်းကစားအပိုင်းအောက်ရှိလောင်းကစားရုံဖောက်သည်ရှိဆိုက်မှတဆင့်တင်ပြသင့်သည်။ အအေးလွန်ကာလပြီးဆုံးသွားသောအခါသင့်ကိုကုမ္ပဏီနှင့်သင်စတင်ခွင့်ပြုပြီးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုလည်းလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
တာဝန်ရှိသည့်ဂိမ်းမျက်နှာပြင်မှတဆင့်အမှန်တကယ်စစ်ဆေးသည့်အချိန်အပိုင်းအခြားကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ သတ်မှတ်ပြီးသည်နှင့်သင်သည်ဂိမ်းများကိုတူညီသော session တစ်ခုအတွင်း၌စတင်ကစားသည့်အချိန်ကုန်လွန်သွားပြီးဖြစ်သည် ("Timecount") ။ Timecount သည်သင်သတ်မှတ်ထားသည့်အမှန်တကယ်စစ်ဆေးသည့်အချိန်အပိုင်းအခြားသို့ရောက်ရှိသွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်ကစားပွဲများဆက်လက်ကစားလိုကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသည်အထိတူညီသော session တစ်ခုအတွင်း၌ပင်ဂိမ်းများကိုဆက်လက်ကစားခြင်းမှတားဆီးလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဂိမ်းများကိုဆက်ကစားလိုကြောင်းအသိအမှတ်ပြုပါက Timecount သည်နောက်ထပ်အဖြစ်မှန်စစ်ဆေးမှုကိုပြန်လည်မပြီးမချင်းထိုအထက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်သည်ပြန်လည်စတင်လိမ့်မည်။ session အသစ်တစ်ခုကိုစတင်ခြင်းသည် Timecount ကိုလည်း reset ဖြစ်စေလိမ့်မည်။ အချိန်မရွေးသင်အမှန်တကယ်စစ်ဆေးသည့်အချိန်အပိုင်းအခြားကို ပြောင်းလဲ၍ ဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။ ထိုသို့ပြောင်းလဲခြင်း (သို့) ဖျက်သိမ်းခြင်းသည်ချက်ချင်းစတင်ဝင်ရောက်လိမ့်မည် (အပြောင်းအလဲဖြစ်လျှင် Timecount ကိုပြန်လည်သတ်မှတ်မည်) ။
ဆိုက်မှကမ်းလှမ်းသောပရိုမိုးရှင်းတစ်ခုအရသင်သည်အရည်အချင်းပြည့်မီသောငွေသွင်းငွေချေပြီးသည်နှင့်ချက်ချင်းအပ်ငွေကိုသင်ချက်ချင်းရရှိမည်။ အပိုဆုငွေ၊ အခမဲ့လောင်းကစားနှင့် / သို့မဟုတ်အခမဲ့လှည့်ခြင်းများပုံစံဖြင့်ငွေဖြည့်လက်ဆောင်သည်သင်၏လက်ကျန်ငွေလက်ကျန်တွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အပိုဆုကြေး၊ အခမဲ့လောင်းကစားများနှင့် / သို့မဟုတ်အခမဲ့လှည့်ဖျားပုံစံများကိုသင့်အားအခမဲ့ဖြည့်စွက်ပေးနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအပိုဆုသင့်ရဲ့အပိုဆုလက်ကျန်ငွေထဲမှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဆိုက်တစ်ခုသည်မှတ်ပုံတင်ကြေးအပိုဆုကြေးပေးသည့်အခါ၊ ဆိုက်တွင်သင်မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်တရားဝင်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဖြည့်ပြီးသင်၏အကောင့်ကိုသက်ဝင်စေပါကသင်သည်မှတ်ပုံတင်ကြေးကိုရနိုင်သည်။ သင်ကမှတ်ပုံတင်သူအသစ်ဖြစ်ပါကဆိုက်နှင့်အကောင့်မရှိဖူးမှသာလျှင်ပေးမည်။ မှတ်ပုံတင်ကြေးကိုအပိုဆုကြေး၊ အခမဲ့လောင်းကစားနှင့် / သို့မဟုတ်အခမဲ့လှည့်ဖျားပုံစံများဖြင့်ပေးနိုင်ပါသည်။ သင်၏အပိုဆုငွေလက်ကျန်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပိုဆုကြေးပေါ်လာလိမ့်မည်။ မည်သည့်ကစားသမားမဆိုဆိုက်တစ်ခုစီတွင်မှတ်ပုံတင်ကြေးအပိုဆုတစ်ခုသာရနိုင်သည်။
မည်သည့်ကစားသမားမဆိုကုမ္ပဏီ၏ကွန်ယက်တွင်မှတ်ပုံတင်ကြေး (၅) ခုနှင့်အားကစားကြိုဆိုပွဲဆု (၁) ခုအထိရနိုင်သည်။ ထို့အပြင်မည်သည့်ကစားသမားမဆို ၄ င်းတို့၏အကောင့်တွင်တစ်လလျှင် (၅) ကြိမ်အခမဲ့အပိုဆုကြေးကိုရနိုင်သည်။
သင်၏လောင်းကြေးကိုအစစ်အမှန်ငွေလက်ကျန်မှပထမဆုံးနှုတ်ယူသည်။ သင်၏လက်ကျန်ငွေပေါ်ရှိသင်၏အစစ်အမှန်ငွေသည်သုညဖြစ်လျှင်သင်၏အပိုဆုလက်ကျန်ငွေမှလောင်းကြေးကိုပြုလိမ့်မည်။ သင်ပြုလုပ်သောငွေပမာဏသည်သင်၏လက်ကျန်ငွေပေါ်ရှိငွေပမာဏထက်ပိုများပါကထိုလောင်းကြေးသည်သင်၏လက်ကျန်ငွေပေါ်ရှိအစစ်အမှန်ငွေပမာဏနှင့်ကျန်ရှိသောလောင်းကြေး - သင်၏အပိုဆုကြေးလက်ကျန်မှရေးလိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောလောင်းကြေးမှမည်သည့်နိုင်ငွေကိုမဆိုအစစ်အမှန်ငွေနှင့်အပိုဆုလက်ကျန်အကြားစစ်မှန်သောငွေပမာဏနှင့်ထိုလောင်းကစားတွင်အသုံးပြုသောအပိုဆုလက်ကျန်ကိုခွဲခြားရမည်။ နောင်အဆင့်တွင်သင်၏သင်၏ငွေလက်ကျန်သည်သုညထက်ကြီးပါကထိုအဆင့်မှသင်ပြုလုပ်သောမည်သည့်လှည့်ကွက်သည်မဆိုသင်၏ငွေလက်ကျန်မှအစစ်အမှန်ငွေမှဖြစ်လိမ့်မည်။
အပိုဆုကြေးဖြင့်လုပ်သောလုပ်အားခများသာပုဒ်မ J.19 နှင့် J.20 နှင့် J.21 (“ လိုအပ်ချက်”) တွင်ရှိသောလောင်းကြေးလိုအပ်ချက်အတွက်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ ပထမဆုံးအောင်မြင်သောငွေသွင်းပြီးနောက်လုပ်သောလုပ်ခများသာလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးလိမ့်မည်။ အစစ်အမှန်ငွေဖြင့်လုပ်သောလုပ်သားများသည်လိုအပ်ချက်ကိုထည့်တွက်မည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင့်တွင်တက်ကြွသောအပိုဆုကြေးတစ်ခုထက်ပိုပါကအပိုဆုကြေးတစ်ခုစီ၏ကန ဦး ပေါင်းလဒ်အရအပိုဆုကြေးနှင့်ဤလိုအပ်ချက်ကိုထည့် ၀ င်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင့်တွင်တက်ကြွသောအပိုဆုကြေး (၃) ခုရှိလျှင်၊ ပထမငွေပမာဏသည်ယူရို (၂)၊ ဒုတိယ၏ (၃) နှင့်တတိယ (ယူရို) ၁၊ ထို့နောက်အနိုင်နှင့်လိုအပ်ချက်ကိုတွက်ချက်သည်။ တစ် ဦး 2-3-1 အုပ်စုခွဲရန်။
ဗီဒီယိုဖိုရမ်အားလုံးနှင့် / သို့မဟုတ်ပါဝါဗီဒီယိုဖဲချပ်များအားလုံးတွင်တင်ထားသည့်လုပ်အား၏ ၅၁ ရာခိုင်နှုန်းကို (၅ ရာခိုင်နှုန်း) သာလျှင်လိုအပ်ချက်ကိုထည့်တွက်ရမည်။ Blackjack, Baccarat, Roulette, poker စားပွဲနှင့် / သို့မဟုတ် jackpot ဂိမ်းများ၏ဗားရှင်းအားလုံးတွင်နေရာချထားသည့် ၁၀၁ ရာခိုင်နှုန်းသောလောင်းကစားသမား ၁၀၁ ရာခိုင်နှုန်းသာလျှင်လိုအပ်ချက်ကိုထည့်တွက်ရမည်။
အောက်ပါဂိမ်းများသည်လိုအပ်ချက်ကိုအထောက်အကူပြုမည်မဟုတ်ပါ။ Cool Buck, Cool Buck5Reels, Dragon Dance, Oz Book, Odds Bookie, Bikini Party, Koi Princess, Ozzy Osbourne, Bonanza, Diamond Mine, Beehive Bedlam, Fruit Blast, Epic ကျောက်မျက်ရတနာများ၊ ၁၄၂၉ ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမရှိသောပင်လယ်များ၊ တောတွင်းဝိညာဉ်များ၊ ခရစ်စမတ်၏လျှို့ဝှက်ချက်များ၊ Astro ဒဏ္:ာရီများ - လိုင်ရာနှင့်အီရီယန်၊ စွန့်ပစ်ထားသောဘုရားသခင့်၊ Baker's Treat၊ ကရာကန်းမျက်လုံး၊ ရွှေဒဏ္,ာရီ၊ Hugo 2၊ , Retro Reels - Diamond Glitz, Retro Reels - အပူ၊ Robin Hood၊ Robin Hood Shifting Riches, Stardust၊ Wish Master၊ Tomb Raider - ဓား၏လျှို့ဝှက်ချက်၊ Tomb Raider, Tomb Raider 2, Tower Quest, Untamed Bengal Tiger, Untamed amedရာမပန်ဒါ၊ untamed Wolf အထုပ်၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာအထူးဘောင်၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာဘီး၊ Reel Rush 2၊ ဂျက်ဟမ် ၂၊ ၀ ံပုလွေကြီး၊ Starmania, Ragnarok, Hot Blizzard ။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ဂိမ်းများကိုအချိန်နှင့်အမျှထပ်မံထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းမှာလိုအပ်ချက်များကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ဤအပိုင်း၏ပြprovisions္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ၊ တစ်ချိန်တည်းတွင်အပိုဆုတစ်ခုသာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ အခြားအပိုဆုကြေး (အခမဲ့လှည့်ဖျားများနှင့်အခမဲ့လောင်းကစားများမှအပကျန်) များကို“ ဆိုင်းငံ့အပိုဆုများ” အဖြစ်သတ်မှတ်လိမ့်မည်။ ၄ င်းတို့၏သက်ဆိုင်သောလောင်းကြေးလိုအပ်ချက်များသည်သက်ဆိုင်ရာအပိုဆုနှင့်စပ်လျဉ်း။ လိုအပ်ချက်ပြည့်မှီသည်၊ သို့မဟုတ်တက်ကြွသောဆုကြေးသက်တမ်းကုန်ဆုံးလျှင်သို့မဟုတ် မည်သည့်အကြောင်းပြချက်များအတွက်ဖျက်သိမ်း; ထို့အပြင်သင်၏အပိုဆုကြေးသည်ပေါင် ၀.၅၀ အောက်ရောက်လျှင်နောက်ထပ်ဆိုင်းငံ့သောအပိုဆု (ရှိလျှင်) သည်လက်ရှိအပိုဆုနှင့်အပြိုင်တက်ကြွလိမ့်မည်။ ဆိုင်းငံ့ထားသောအပိုဆုကြေး (အခမဲ့လှည့်ဖျားများနှင့်အခမဲ့လောင်းကစားများမှအပကျန်) ကိုမကစားနိူင်ပါ။ ၎င်းသည်မတက်ကြွမီအပိုဆုလက်ကျန်စာရင်းတွင်ပေါ်မည်မဟုတ်ပါ။ ဆိုင်းငံ့ထားသောအပိုဆုများ (အခမဲ့လှည့်ဖျားများနှင့်အလောင်းအစားများမှအပကျန်ငွေများ) ကိုတက်ကြွစွာစတင်ရန်သင့်အားပေးအပ်သည့်အချိန်ပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မည်။ သင် activate လုပ်လိုသော Pending Bonus မတိုင်မီ activate နှင့် Pending Bonus များကိုပယ်ဖျက်ခြင်းအားဖြင့် Pending Bonus ကို activate လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အကယ်၍ သင်သည်အပိုဆုတစ်ခုကိုဖျက်သိမ်းလိုပါကပယ်ဖျက်ခြင်းကိုအကောင့် (Tab)> အပိုဆုမှတ်တမ်း tab အောက်တွင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်အပိုဆုကြေးများကိုလည်းဖယ်ရှားပြီးအမှန်တကယ်ငွေအဖြစ်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
သင်သည်သင်၏အစစ်အမှန်ငွေလက်ကျန် (သင်၏အပ်ငွေနှင့်အပ်ငွေမှရရှိသောမည်သည့်အနိုင်ငွေကို) မဆိုအချိန်မရွေးထုတ်ယူနိုင်သည်။ သို့သော်၊ သင်၏လိုအပ်သောငွေလက်ကျန်မှငွေထုတ်ယူရန်မည်သည့်တောင်းဆိုမှုမဆိုမလိုအပ်သည်ကိုမဖြည့်မှီသင်၏လက်ကျန်ငွေလက်ကျန်မှအပိုဆုရန်ပုံငွေများကိုအပြည့်အ ၀ ဖယ်ရှားပစ်မည်ဖြစ်ပြီးသူတို့သည်အမှန်တကယ်ငွေအဖြစ်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ မဆိုဆိုင်းငံ့အပိုဆုအဖြစ်ကောင်းစွာဖယ်ရှားလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည်အပိုဆုကြေးနှင့် ပတ်သက်၍ မကောင်းသောနည်းဖြင့်ပြုမူသည်ဟု (သို့မဟုတ်) အပိုဆုကြေးကိုအလွဲသုံးစားပြုရန်ကြိုးစားသည်ဟုကုမ္ပဏီကယူဆပါကအပိုဆုကြေးရရှိရန်သင်အရည်အချင်းပြည့်မီလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အလွဲသုံးစားမှုတွင်မမျှတသောအားသာချက်တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်ကြိုးစားခြင်း၊ မည်သည့်အပိုဆုကြေးကိုမဆိုရယူနိုင်ရန်ကုမ္ပဏီကွန်ယက်အတွင်းအကောင့်မျိုးစုံကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အပိုဆုကြေး၊ အငြင်းပွားခြင်း၊ တစ် ဦး တည်းဖြစ်စေအခြားသူများနှင့်အတူတကွလက်ခံခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ အရာမသက်ဆိုင်ဘဲမူလအဆိုပါ၏ရလဒ်၏အာမခံအမြတ်အစွန်းများအတွက်ပေးပါသည်။
ကုမ္ပဏီသည်ဤအခန်းကိုပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း (သို့) မည်သည့်ကမ်းလှမ်းချက်နှင့်မည်သည့်ရာထူးတိုးမြှင့်မှုများကိုမဆိုကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိပဲ - သင့်အားမပေးရသေးသောဆုကြေးငွေများနှင့်စပ်လျဉ်း။ အခွင့်အရေးရှိသည်။ ပြောင်းလဲမှုမတိုင်မီကပေးသောမည်သည့်ဆုကြေးငွေကိုမဆိုထိခိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်ရရှိသောမည်သည့်အပိုဆုကိုမဆိုသက်ဆိုင်သည့်စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများနှင့်အပိုဆုမူဝါဒသည်သင်နှင့်ရရှိသောပရိုမိုးရှင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောမြှင့်တင်ရေးကိုလက်မှတ်ထိုးသည့်အချိန်တွင်စည်းကမ်းချက်များနှင့်၎င်း၏အပိုဆုပေါ်လစီဖြစ်သည်။ ဤအပိုင်းမှမည်သည့်အရာကမျှကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုထားသောအခြားမည်သည့်အခွင့်အရေးနှင့် / သို့မဟုတ်ကုစားနည်းကိုကန့်သတ်ထားသည်။
အခမဲ့ပိုက်ဆံအပိုဆုကြေးမှအပိုဆုငွေများကိုအပိုဆုကြေး၏မူလပေါင်းလဒ် ("လိုအပ်ချက်") အရအကြိမ်ပေါင်း ၅၀ (၅၀) လောင်းပြီးမှသာစစ်မှန်သောငွေသို့ပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ သင်၏အပိုဆုကြေးအားသင်၏အကောင့်ထဲသို့ထည့်သွင်းပြီးရက် ၃၀ (သုံးဆယ်) အတွင်းဖြည့်ဆည်းရမည်။ သို့မဟုတ်ပါကအပိုဆုကြေးသည်သင်၏အပိုဆုကြေးကိုအပြည့်အ ၀ ဖယ်ရှားပြီးအမှန်တကယ်ငွေအဖြစ်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်အပိုဆုသည်ဆိုင်းငံ့အပိုဆုဖြစ်သည်ကာလကိုထိုရက် ၃၀ (သုံးဆယ်) ကာလ၏ကာလအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
အပိုဆုကြေးမှအခမဲ့ငွေအပိုဆုမှစစ်မှန်သောငွေသို့ပြောင်းလဲခြင်းကိုကန ဦး ပမာဏ၏ ၃ ဆ (၃) ဆနှင့်ညီသည်။ ပြောင်းလဲခြင်းကန့်သတ်ချက်ထက်ပိုသောဘောနပ်စ်ပမာဏမည်သည့်ငွေပမာဏကိုမဆိုအစစ်အမှန်ငွေသို့ပြောင်းလဲလိမ့်မည်မဟုတ်ဘဲသင်၏အပိုဆုကြေးမှဖယ်ထုတ်လိမ့်မည်
အခမဲ့လှည့်ဖျားမှုများမှရရှိသောနိုင်ငွေများကိုသက်ဆိုင်ရာအပိုဆုကြေး၏ကန ဦး ပေါင်းလဒ်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
အခမဲ့လှည့်ဖျားဘောနပ်စ်မှရရှိသောအပိုဆုရန်ပုံငွေများသည်ထိုအပိုဆု၏ကန ဦး ပမာဏ (၅၀ (၅၀) ဆ) (ဆိုလိုသည်မှာမူရင်းအခမဲ့လှည့်ဖျားများမှရရှိသောအနိုင်ရရှိမှုများ) ("လိုအပ်ချက်") အပြီးတွင်မှသာစစ်မှန်သောငွေသို့ပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပြီး ၇ ရက် (၇) ရက်အတွင်းအပြည့်အ ၀ ဖြည့်ဆည်းရမည်။ သို့မဟုတ်ပါကအပိုဆုကြေးကိုသင်၏လက်ကျန်ငွေမှအပြည့်အ ၀ ဖယ်ရှားပစ်မည်ဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ငွေအဖြစ်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အခမဲ့လှည့်ဖျား; ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်အပိုဆုသည်ဆိုင်းငံ့အပိုဆုဖြစ်သည်ကာလကို (၇) ရက်ကာလ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
အခမဲ့လှည့်ဖျားဆုကြေးမှအပိုဆုရန်ပုံငွေများကိုတကယ့်ငွေအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းသည်£ 20 တွင်ရှိသည်။ ပြောင်းလဲခြင်းကန့်သတ်ချက်ထက်ပိုသောဘောနပ်စ်ပမာဏမည်သည့်ငွေပမာဏကိုမဆိုအစစ်အမှန်ငွေသို့ပြောင်းလဲလိမ့်မည်မဟုတ်ဘဲသင်၏အပိုဆုကြေးမှဖယ်ထုတ်လိမ့်မည်
အခမဲ့အလောင်းအစားများမှရရှိသောနိုင်ငွေများ (လောင်းကြေးအလောင်းအစားများစုစုပေါင်းကိုလျော့နည်း) သည်သင်၏အပိုဆုကြေးရန်ပုံငွေသို့ပေါင်းထည့်မည်။
အခမဲ့လောင်းကြေးအပိုဆုကြေးမှအပိုဆုငွေသည်အစစ်အမှန် (၁၀) ဆအခကြေးငွေ (ကန ဦး အခမဲ့လောင်းကြေးမှရရှိသောအနိုင်ငွေများ) ("လိုအပ်ချက်") ကို ၁၀ (၁၀) ကျပ်လောင်းပြီးနောက်မှသာစစ်မှန်သောငွေသို့ပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပြီး ၇ ရက် (၇) ရက်အတွင်းအပြည့်အ ၀ ဖြည့်ဆည်းရမည်။ သို့မဟုတ်ပါကအပိုဆုကြေးကိုသင်၏လက်ကျန်ငွေမှအပြည့်အ ၀ ဖယ်ရှားပစ်မည်ဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ငွေအဖြစ်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အလောင်းအစားများ၊ ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်အပိုဆုသည်ဆိုင်းငံ့အပိုဆုဖြစ်သည်ကာလကို (၇) ရက်ကာလ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ အခမဲ့လောင်းကြေးနှင့် / သို့မဟုတ်အပိုဆုကြေးငွေများလောင်းကစားသည့်ဖြစ်ရပ်သည်အဆုံးသတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ၇ ရက် (၇) ရက်လိုအပ်ချက်အတွက်အပိုဆုကြေးသက်တမ်းကုန်ဆုံးမတိုင်မီရလဒ်ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။
အခမဲ့အလောင်းအစားအပိုဆုမှအပိုဆုရန်ပုံငွေများကိုတကယ့်ငွေအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းသည်£ 20 တွင်ရှိသည်။ ပြောင်းလဲခြင်းကန့်သတ်ချက်ထက်ပိုသောဘောနပ်စ်ပမာဏမည်သည့်ငွေပမာဏကိုမဆိုအစစ်အမှန်ငွေသို့ပြောင်းလဲလိမ့်မည်မဟုတ်ဘဲသင်၏အပိုဆုကြေးမှဖယ်ထုတ်လိမ့်မည်။
ဆိုက်၏လှုပ်ရှားမှုနှင့်မည်သည့်အမှားအယွင်းများ၊ ဖြစ်ရပ်များတွင်ပါဝင်သူများ၏အမည်များ၊ မသန်မစွမ်းမှုများနှင့် / အပါအ ၀ င်ဖြစ်ရပ်များနှင့် (သို့မဟုတ်) ကစားပွဲများနှင့်စပ်လျဉ်း။ အမှားအယွင်းများမဆိုတားဆီးရန်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်စီးပွားဖြစ်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာကြိုးပမ်းအားထုတ်ရမည်။ သို့မဟုတ်အလောင်းအစား၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများ။ သို့သော်မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်မဆိုဆိုက်၏စနစ်များတွင်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှု (သို့မဟုတ်အခြားအမှားတစ်ခုခု) တစ်ခုခုဖြစ်လျှင်ကုမ္ပဏီသည်ချွတ်ယွင်းမှုများဖြစ်ပွားနေသည့်အားကစားပွဲများတွင်သင်၏ပါ ၀ င်မှုကိုဖျက်သိမ်းခွင့်ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်မျိုးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်နှင့်တာဝန်ဝတ္တရားသည်ဤဂိမ်းတွင်ပါ ၀ င်မှုအတွက်သင်မှပေးဆောင်သည့်ပါ ၀ င်မှုအခကြေးငွေနှင့် / သို့မဟုတ်လောင်းကြေးကိုသာကန့်သတ်ထားမည်ဖြစ်ပြီးသင်၏အကောင့်သည်ထိုကဲ့သို့သောပါ ၀ င်မှုအခကြေးငွေနှင့် / သို့မဟုတ်အလောင်းအစားများကိုသတ်မှတ်မည်။
၀ န်ဆောင်မှုများကိုမည်သည့်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်မဆို ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ်များ၊ ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုများ၊ ချိုးဖောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း၊ လိမ်လည်ခြင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏ထိန်းချုပ်မှုထက် ကျော်လွန်၍ ကျရှုံးမှုများသို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းရင်းများ။ အမှားအယွင်းများသည်သင့်အားအနိုင်ပေးသောဆုများသို့မဟုတ်သင့်အားပေးအပ်ထားသောသို့မဟုတ်သင့်အားပေးဆောင်သည့်ငွေပမာဏကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြစ်လျှင်သင်ဤအနိုင်ငွေကိုခံစားခွင့်မရှိပါ။ သင်ကုမ္ပဏီအားချက်ချင်းအကြောင်းကြားပြီးသင်၏ကုမ္ပဏီသို့ (ကုမ္ပဏီမှညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း) အားအမှားဖြင့်အသိအမှတ်ပြုသည့်မည်သည့်အနိုင်ငွေကိုမဆိုပြန်လည်ပေးဆပ်ရမည်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီသည်သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်သင်၏အကောင့်မှရရှိသောငွေပမာဏနှင့်ညီမျှသောငွေပမာဏကိုနုတ်နိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်သင့်အားပေးဆပ်ရန်ကျန်ရှိနေသည့်မည်သည့်ငွေကိုမဆိုငွေပြန်အမ်းပါ။
ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်သင့်အား၎င်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆိုင်းငံ့ခြင်းကိုကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ဖြင့်ရယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ၎င်းသည်သင့်အားခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်သောမည်သည့်အခွင့်အရေးကိုမျှထိခိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
သင်သို့မဟုတ်သင့်အကောင့်မှတစ်ဆင့်ပြုလုပ်သောမည်သည့်လောင်းကြေး၊ လောင်းကြေးသို့မဟုတ်အခြားလောင်းကြေးကိုမဆိုကန့်သတ်ရန်၊ ပယ်ဖျက်ရန်သို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းရန်နှင့်မည်သည့်ဂိမ်းကိုမဆိုပယ်ဖျက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ (ထိုကဲ့သို့သောဖျက်သိမ်းခြင်းသည်သင်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်တတိယပါတီ၏လုပ်ရပ်များကြောင့်ဖြစ်သည်ဖြစ်စေ) ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်မည်သည့်လိမ်လည်မှုကိုမဆိုလုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားဆိုးသွမ်းသောလုပ်ရပ်တစ်ခုခုကိုကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်တတိယပါတီအားဆန့်ကျင်သည်ဟုကုမ္ပဏီကယုံကြည်လျှင်၊ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်၊ ဖြစ်ရပ်၏သမာဓိကိုသင်အားဖြင့်၊ သင်နှင့်သင်နှင့်သက်ဆိုင်သောမည်သူနှင့် (သို့) တတိယပါတီမှမေးခွန်းထုတ်သည်ကိုကုမ္ပဏီကကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာသံသယဝင်လျှင် (အပါအ ၀ င်) ပါဝင်သည် (ထိုကဲ့သို့သောသံသယသည်အရွယ်အစားပေါ် အခြေခံ၍ ပေါ်ပေါက်နိုင်သည်။ ၊ သင်နှင့် / သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများနှင့် / သို့မဟုတ်တတိယပါတီများနှင့်ပြုလုပ်သောအလောင်းအစားများအပြင်သက်ဆိုင်သည့်အာဏာပိုင်များနှင့် / သို့မဟုတ်ပွဲစီစဉ်သူသို့မဟုတ်အားကစားအဖွဲ့မှအစပြုပြုလုပ်သောမည်သည့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမဆိုသင်နှင့် / သို့မဟုတ်အခြားပုဂ္ဂိုလ်များပြုလုပ်သောအလောင်းအစားများ၏ပမာဏ၊ နံပါတ်နှင့် / သို့မဟုတ်ပုံစံ။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်သင်သည်ဤဂိမ်းတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းအတွက်သင်ပေးခဲ့သည့်ပါ ၀ င်မှုအခကြေးငွေနှင့် / သို့မဟုတ်လောင်းကြေးကိုသင်သာခံယူခွင့်ရှိသည်။ သင့်အကောင့်ကိုသင့်လျော်စွာအသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်သင်ကစားနိုင်သည့်ဂိမ်းမှမည်သည့်နိုင်ငွေကိုမျှရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ ဤသို့သောနိုင်ငွေကိုသင့်အားပေးခဲ့ပါကကုမ္ပဏီသည်သင်၏ငွေလက်ကျန်ကိုထိုအနိုင်ငွေပမာဏအားလျှော့ချလိမ့်မည် (အကယ်၍ ငွေလက်ကျန်မလုံလောက်ပါကကျန်ရှိသောငွေပမာဏအားဖြင့်သင်ကုမ္ပဏီအားပြန်လည်ပေးဆပ်မည်) ။ အကယ်၍ သင်သည်ဂိမ်းများကစားနေစဉ်အင်တာနက်မှအဆက်ပြတ်နေလျှင် (အခြားမကောင်းသောအပြုအမူများကြောင့်သင်၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖြတ်တောက်ခြင်းအားဖြင့်မဟုတ်ပါ)၊ ဂိမ်းများ၏ရလဒ်များနှင့်သင်၏အကောင့်၏လက်ကျန်ငွေသည်ထိုကဲ့သို့သောဆက်သွယ်မှုမပြတ်မီကကဲ့သို့ပင်ဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်မည်သည့်ဂိမ်းနှင့်မဆိုပြတ်တောက်မှုများနှင့် / သို့မဟုတ်နည်းပညာဆိုင်ရာအခက်အခဲများကြုံတွေ့ရပါကသင်အားလောင်းကစားပြီးပါကဂိမ်းကစားခြင်းကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနှင့်ပြတ်တောက်ခြင်းမပြုမီကပြန်လည်ခံစားခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာအခက်အခဲများအရပျကိုယူ။ ထိုကဲ့သို့သောပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းမဖြစ်နိုင်ပါကကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ဂိမ်းအဆုံးသတ်ခြင်းကိုသေချာစေပြီးသင်၏ငွေစာရင်းကိုငွေပြန်အမ်းခြင်း၊ ထိုအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်ပြီးမော်လ်တာဂိမ်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့သို့မဟုတ်လောင်းကစားကော်မရှင်သို့ချက်ချင်းအကြောင်းကြားပြီးထိုကစားပွဲကိုပြန်လည်ကစားခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဒါကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်သောပျက်ကွက်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားစေခြင်းငှါညွှန်ပြနေသည်။
ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် / သို့မဟုတ်အပိုဆုကြေးနှင့် / သို့မဟုတ်ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ဂိမ်းအသစ်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ အပိုဆုကြေးများနှင့် / သို့မဟုတ်အသစ်များကိုမိတ်ဆက်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ သို့မဟုတ်မြှင့်တင်မှုများ - ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ရပ်အားနောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ခြင်းမရှိပါက။ ပြောင်းလဲမှုမတိုင်မီကပေးသောမည်သည့်ဆုကြေးငွေကိုမဆိုထိခိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ပြောင်းလဲမှုများကြောင့်သင်ခံစားခဲ့ရသောမည်သည့်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်မဆိုကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်တာ ၀ န်မရှိပါ။
ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းပျက်ကွက်ခြင်း၊ ခိုးယူခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်ဆီးခြင်းသို့မဟုတ်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခြင်းသို့မဟုတ်အချက်အလက်သို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်၎င်းမှပေါ်ပေါက်လာသည့်တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်ဆုံးရှုံးမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်မရှိပါ။ အဖြစ်အပျက်။ မည်သည့်ကွန်ယက်သို့မဟုတ်လိုင်းများ၊ ဝိုင်ဖိုင်၊ Bluetooth၊ ကွန်ပျူတာများ၊ စနစ်များ၊ ဆာဗာများသို့မဟုတ်ပံ့ပိုးသူများ၊ ကွန်ပျူတာပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ကိုမဆိုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ မိုဘိုင်းဆိုက်သို့မဟုတ်မိုဘိုင်း application ။ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် / သို့မဟုတ်သင်၏အကောင့်နှင့်ပတ်သက်သောစနစ်များ၊ ဆက်သွယ်ရေးအမှားများ၊ bug များသို့မဟုတ်ဗိုင်းရပ်စ်များကြောင့်သို့မဟုတ်သင်၏စက်ပစ္စည်းနှင့် / သို့မဟုတ်ဆော့ဖ်ဝဲနှင့် / သို့မဟုတ်ဒေတာများကိုပျက်စီးစေသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားတာ ၀ န်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
အမြတ်အစွန်း၊ ၀ င်ငွေ၊ ဒေတာ၊ အသုံးပြုမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အမြတ်၊ အမြတ်၊ ဆုံးရှုံးမှုအတွက်တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်၊ ဖြစ်ပျက်မှု၊ ဆိုက်၊ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် / သို့မဟုတ်အခြားတစ်နေရာသို့ဝင်ရောက်ခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဆိုဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသောနှင့် / သို့မဟုတ်ကမ်းလှမ်းထားသောသတင်းအချက်အလက်၊ ဆော့ဖ်ဝဲ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏သင့်လျော်မှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ ရနိုင်မှု၊ သတင်းအချက်အလက်၊ ဆော့ (ဖ်) ဝဲ၊ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုမည်သည့်အာမခံချက်မျှမပါရှိဘဲပေးထားပါသည်။ ဆိုက်တွင်ပါ ၀ င်သောသို့မဟုတ်ကမ်းလှမ်းထားသောသတင်းအချက်အလက်၊ ဆော့ဖ်ဝဲ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်သောအာမခံများအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဥပဒေအားငြင်းပယ်သည်။
မည်သည့်အမျိုးအစား၊ မည်သည့်အမျိုးအစားကိုမဆိုမှီခိုမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောမည်သည့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့်သက်ဆိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာ ၀ န်မရှိပါ။ ဆိုက်တွင်ပေါ်ထွန်းနေသောမည်သည့်ထုတ်ဝေမှုသို့မဟုတ်မည်သည့်အကြောင်းအရာကိုမဆိုမှီခိုမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောကြောင့်သင်ဆိုက်တွင်ထုတ်ဝေထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုအတည်ပြုရန်သင့်အားဖိတ်ကြားပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူ (သို့) သင့်အားဆိုက်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးသည့်အခြားတတိယပါတီ၏လုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ပျက်ကွက်မှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာ ၀ န်မရှိပါ။
ကျပန်းနံပါတ်မီးစက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ဆက်စပ်သောလိုအပ်သောကျပန်းထုတ်လုပ်သည့်အဖြစ်အပျက်များကိုဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်ဟုသင်လက်ခံပြီးသဘောတူသည်။ သင့်ထံမှရရှိသောရလဒ်သည်ကုမ္ပဏီ၏ဆာဗာတွင်ပြထားသောရလဒ်နှင့် (ဆန့်ကျင်ဖက်ကုမ္ပဏီများမှကုမ္ပဏီကိုယ်စားဆောင်ရွက်သောဆာဗာများ)၊ ကုမ္ပဏီ၏ဆာဗာတွင်ပြသသည့်ရလဒ် (သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်စားတတိယပါတီများမှလုပ်ကိုင်သောဆာဗာများပေါ်တွင်) သည်အခြေအနေအားလုံးတွင် ဦး စားပေးရမည်။ သင်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်တမ်းများ (သို့မဟုတ်သူ၏ကိုယ်စားထိန်းသိမ်းထားသောမှတ်တမ်းများ) သည်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများအသုံးပြုမှု၏စည်းကမ်းချက်များကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးသည့်နောက်ဆုံးအခွင့်အာဏာဖြစ်သည်ကိုသင်နားလည်ပြီးသဘောတူသည်။
ဆိုက်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်ကိုယ်တိုင်စွန့် စား၍ အသုံးပြုမည်။ ဆိုက်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုခုအားပြုပြင်ခြင်း၊ တိုးမြှင့်ခြင်း၊ ရပ်စဲခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်းသို့မဟုတ်ရပ်စဲခြင်းတို့ကြောင့်သင်ခံရမည့်မည်သည့်ပျက်စီးမှုသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်မရှိပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၊ မိုဘိုင်းဆိုက်နှင့် / သို့မဟုတ်ဆိုဒ်ပေါ်ရှိလင့်ခ်များပေါ်လာသည့်မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းများ၏အသုံးပြုမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်သင်အသုံးပြုခြင်းကြောင့်သင်ခံရမည့်မည်သည့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်မရှိပါ။
အဆိုပါ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၊ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဆိုက်၏ပါဝင်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသောဆော့ဖ်ဝဲများကို“ ဖြစ်သကဲ့သို့” ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် (ဥပဒေ၊ ပြဌာန်းချက်အရဖြစ်စေ၊ အခြားနည်းအားဖြင့်ဖြစ်စေ) ဖော်ပြခြင်းနှင့်အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သည်ဖြစ်စေ၊ တိကျသောရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက်သင့်လျော်ခြင်း၊ ပြည့်စုံမှုသို့မဟုတ်တိကျမှု၊ တတိယပါတီ၏အခွင့်အရေးများကိုချိုးဖောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆိုက်၊ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဆိုက်နှင့်ပါတ်သက်သောဆော့ဝဲများနှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်သောဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာခြင်း၊ သို့မဟုတ်ဆိုက်၊ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဆိုက်၏အကြောင်းအရာနှင့်၎င်းနှင့်ဆက်နွယ်နေသောအသုံးပြုသောဆော့ဖ်ဝဲသည်အနှောင့်အယှက်မရှိ၊ အချိန်မီ၊ လုံခြုံမှုမရှိ၊ အမှားကင်းလိမ့်မည်သို့မဟုတ်အမှားများကိုတည့်မတ်ပေးလိမ့်မည်၊ ဆိုက်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများမှတဆင့်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်များ၏တိကျမှန်ကန်မှုကို။
မူပိုင်ခွင့်၊ မူပိုင်ခွင့်၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ ၀ န်ဆောင်မှုအမှတ်အသားများ၊ အမှတ်တံဆိပ်၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ ဗဟုသုတသို့မဟုတ်အခြားမူပိုင်ခွင့်များအပါအ ၀ င်အခွင့်အရေးများအားလုံးနှင့်၎င်းနှင့်ပါ ၀ င်သည့်အရာများ (အပါအဝင်၊ ပရိုဂရမ်များ၊ ဖိုင်များ၊ ဗီဒီယို၊ အသံ၊ ရုပ်ပုံများ၊ ဂရပ်ဖစ်၊ ရုပ်ပုံများ၊ စာသားနှင့်ဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုများ (ကန့်သတ်ချက်များသည်“ အခွင့်အရေးများ”) သည်အကန့်အသတ် ရှိ၍ ကုမ္ပဏီ၏တစ်ခုတည်းသောသီးသန့်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် / သို့မဟုတ်မည်သည့်အရာကိုမဆိုကန့်သတ်ထားသည်။ ၎င်း၏လိုင်စင်ရ၏။ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ မှလွဲ၍ မည်သည့်အခွင့်အရေးကိုမဆိုကုမ္ပဏီ၏ကြိုတင်ရေးသားထားသောခွင့်ပြုချက်မရဘဲ အသုံးပြု၍ မရပါ။ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ မည်သည့်အခွင့်အရေးကိုမဆိုမည်သည့်အခွင့်အရေးကိုမဆိုရယူခြင်းမပြုရပါ။ အထက်ဖော်ပြပါအချက်များမှသွေဖည်ခြင်းမရှိဘဲ၊ (i) ကူးယူခြင်းကိုသင်လုံးဝတားမြစ်သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် / သို့မဟုတ်ဆိုက်၏အရင်းအမြစ်ကုဒ်ရယူရန်မည်သည့်ကြိုးပမ်းမှုကိုမဆိုပြန်လည်ခွဲဝေခြင်း၊ ထုတ်ဝြေခင်း၊ ပြန်လည်အင်ဂျင်နီယာ၊ ပုံဖော်ခြင်း၊ ပြန်လည်ဖြုတ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ (၃) ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရောင်းချခြင်း၊ သတ်မှတ်ခြင်း၊ လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း၊ လိုင်စင်ချထားခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊
၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့် / သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်မည်သည့်အရာနှင့်မဆိုကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီဖောက်သည်များ၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုကုမ္ပဏီသို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ customersupport@instantgamesupport.com
ကုမ္ပဏီမှ ၀ န်ထမ်းများအပေါ်တွင်သင်ပြသထားသောမည်သည့်ရက်စက်သောအပြုအမူကိုကုမ္ပဏီမှသည်းမခံနိုင်ပါ။ အကယ်၍ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်တယ်လီဖုန်း၊ တိုက်ရိုက်စကားပြောခြင်း၊ အီးမေးလ် (သို့) အခြားနည်းများဖြင့်သင်၏အပြုအမူသည်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ထမ်းများအပေါ်မတော်မတရားပြုခြင်းသို့မဟုတ်အရှက်ရစေခြင်းဖြစ်သည်ဟုယူဆပါကကုမ္ပဏီအနေဖြင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်၊ သင်၏အကောင့်ကို (ဆိုင်းငံ့ထားသည့်ရန်ပုံငွေများအားလုံးအေးခဲစေခြင်းအပါအ ၀ င်) ကိုရပ်ဆိုင်းပြီးသင်၏အကောင့်ရှိအပိုဆုများ၊
သင်၌တစ်ခုခုရှိရန်အကြောင်းပြချက်ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ complaints@instantgamesupport.com။ သင်၏တိုင်ကြားချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုင်တွယ်မည်ဖြစ်ပြီးအငြင်းပွားမှုများအားလုံးကိုတတ်နိုင်သမျှမြန်မြန်နှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။
သင်၏အကောင့်ကိုလောင်းကစားကော်မရှင် (ယူကေရှိဖောက်သည်များ) ကထိန်းချုပ်ထားပါကသင်တိုင်တန်းမှုပြုလုပ်သည့်အဖြစ်အပျက်မှရက် ၆ လတိုင်တိုင်သင်တိုင်ကြားနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်၏အကောင့်ကိုလောင်းကစားကော်မရှင် (ယူကေရှိဖောက်သည်များ) ကစည်းကမ်းသတ်မှတ်ထားပါက ၂၄ နာရီအတွင်းသင်၏တိုင်ကြားချက်ကိုလက်ခံရရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ကအသိပေးမည်ဖြစ်ပြီးတိုင်ကြားမှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကလိုအပ်သည်အတိုင်းကန ဦး တိုင်ကြားချက်ကိုပြုလုပ်သည့် အချိန်မှစ၍ ရှစ်ပတ်မပြည့်မှီ SR code ပြ6္ဌာန်းချက် ၆.၁.၁.၂ ။ ယခုအချိန်တွင်ကုမ္ပဏီသည်တိုင်ကြားချက်၏နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအသေးစိတ်ဖြင့်ကုမ္ပဏီအားသင်နှင့်ဆက်သွယ်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်လုပ်လိုပါကသင်၏တိုင်ကြားမှုကိုလွတ်လပ်သော ADR အဖွဲ့အစည်းသို့မည်သို့တိုးမြှင့်ရမည်ကိုဖော်ပြသည် ဒီတော့
ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည်တွင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တိုင်ကြားခြင်းသို့မဟုတ်အငြင်းပွားခြင်းများကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါကသင်အငြင်းပွားမှုကိုအခြားအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ (ADR) သို့လွှဲပြောင်းနိုင်သည်။ အကျုံးဝင်သော ADR အဖွဲ့အစည်းသည်လွတ်လပ်သောလောင်းကစားခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ဝန်ဆောင်မှု (IBAS) ကိုအခမဲ့ဖြစ်သည်။ အောက်ပါအတိုင်း IBAS ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် -
တစ်ခုခုမှာအွန်လိုင်းရရှိနိုင်သည့်ပုံစံအားဖြင့်ရယူနိုင်ပါတယ် http://www.ibas-uk.com ပင်မစာမျက်နှာတွင် - တယ်လီဖုန်းနံပါတ် (0207 347 5883) မှတဆင့်လည်းပုံစံကိုတောင်းခံနိုင်သည်။
ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့စပ်ကြားရှိဆက်ဆံရေးကိုမော်လ်တာဥပဒေများအရအုပ်ချုပ်လိမ့်မည်၊ အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူ။ အနက်ဖွင့်ရမည်။ တရားဝင်မှု၊ ဖောက်ဖျက်ခြင်း၊ အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်သို့မဟုတ်ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများနှင့် ဆက်စပ်၍ သို့မဟုတ်သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အကြားရှိဆက်စပ်မှုမှပေါ်ပေါက်လာခြင်း။ ကုမ္ပဏီ၏လောင်းကစားကော်မရှင်လိုင်စင်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်မည်သည့်အရာနှင့်မဆိုဤစည်းကမ်းချက်များနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတွင်းအင်္ဂလန်ဥပဒေများအသုံးပြုခြင်းကိုဖယ်ရှားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ဤအခွင့်အရေးများနှင့်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများအားလုံးကိုတတိယပါတီသို့လွှဲပြောင်းပေးအပ်နိုင်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါအချက်များနှင့်မသက်ဆိုင်ပါကဆိုက်နှင့် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုများကိုတတိယပုဂ္ဂိုလ်များကလည်ပတ်နိုင်သည်။ ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအရသင်၏အခွင့်အရေးများသို့မဟုတ်တာဝန်ဝတ္တရားများကိုမည်သည့်နည်းနှင့်မျှလွှဲပြောင်းခြင်း၊ သတ်မှတ်ခြင်း၊
ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများတွင်အတိအလင်းဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါကဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများတွင် (i) မည်သည့်အေဂျင်စီ၊ အစီအစဉ်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသို့မဟုတ်သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အကြားအလားတူဆက်ဆံရေးမျိုးကိုမဆိုဖန်တီးသည်ဟုအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူရမည်။ (၂) မည်သည့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆိုအခွင့်အရေးသို့မဟုတ်အကျိုးခံစားခွင့်များကိုဖန်တီးသို့မဟုတ်အပ်နှင်းခြင်းနှင့် (သို့မဟုတ်) (၃) သင်၏အကောင့်တွင်ထည့်သွင်းထားသောငွေပမာဏအပါအ ၀ င်ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုခုအတွက်လုံခြုံရေးအကျိုးစီးပွားကိုသင့်အားပေးအပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်း။ အီးမေးလ်နှင့် / သို့မဟုတ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်အသိပေးမှုများပြုလုပ်နိုင်ပြီးထိုအသိပေးစာကိုသင့်ထံပေးပို့သည့် အချိန်မှစ၍ ၂၄ နာရီအတွင်းသင့်အားလက်ခံရရှိသည်ဟုမှတ်ယူလိမ့်မည် အဆိုပါဖျောပွထုံးစံ။
မည်သည့်အခွင့်အရေး၊ ပါဝါ (သို့) ကုစားမှုအားမဆိုကျင့်သုံးခြင်း၌ကျွန်ုပ်တို့၏အစိတ်အပိုင်းကိုပျက်ကွက်ခြင်းသို့မဟုတ်နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဟုငြင်းဆိုခြင်းမပြုရ။ ထိုသို့သောမည်သည့်အခွင့်အရေး၊ အခြားအခွင့်အရေး, ပါဝါသို့မဟုတ်ကိုးကွယ်ရာ။
ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားအရည်အချင်းပြည့်မီသောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသောတရားရုံးတစ်ခုမှသက်ဆိုင်သောဥပဒေအရအတည်မပြုနိုင်ပါကထိုစည်းကမ်းချက်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များမှဖယ်ထုတ်ပစ်ရမည်ဖြစ်ပြီးကျန်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများအားဤပြဌာန်းချက်အတိုင်းအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူလိမ့်မည် ဒါဖယ်ထုတ်လိုက်နှင့်၎င်း၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီအတည်ပြုရလိမ့်မည် ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်တွင်ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရန်နှင့်သက်ဆိုင်သောဥပဒေအရသက်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်အညီအမြင့်ဆုံးအတိုင်းအတာအထိအဓိပ္ပာယ်ပြည့် ၀ စေရန်တရား ၀ င်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတရားရုံးမှဆုံးဖြတ်သည့်အတိုင်းအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူရန်လိုအပ်သည်။ ။
ဗားရှင်း 1.2.9 - 14.07.2020